အငမျးမရ – My Blog
ကြျောညှနျ့တှငျ ယခုထကျထိ ရညျးစားလညျး မရှိ၊ မိနျးမဆို ဝလောဝေး။ ကားစီးသညျ့အခါ ထိမိ ခိုကျမိတာလောကျကလေးမြားသာ အတှအေ့ကွုံ ရှိသညျ။ ဘကွီးတျောသူ၏ ခွံတှငျ လာရောကျ နထေိုငျပွီး သားသမီးကဲ့သို့ အတူ ဝိုငျးဝနျး လုပျကိုငျနသေူ ဖွဈသညျ။ သူနသေော ရပျကှကျမှာ လူခမျြးသာမြား၏ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြား လုပျရနျ သငျ့လြျောသော မွကှေကျကယျြ၊ ခွံကှကျကယျြကွီးမြားဖွငျ့ တသီးတသနျ့ ဖွဈနလေသေညျ။ ဘကွီးလုပျသူမှာ မွနျမာဖွဈသျောလညျး တရုတျလူမြိုးမြား သုံးသညျ့ ပစ်စညျးထုတျသော လုပျငနျးကွီးတဈခုကို လုပျကိုငျနသေူ ဖွဈသညျ။ ကိလသော ကာမပိုးမြား ထကွှလာမှုကွောငျ့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ အခြိုးကသြော မိနျးမမြားကို တှလြေှ့ငျ ရှမှေ့၊ နောကျမှ၊ ဘေးမှ အစုံကွညျ့ကာ စိတျနှငျ့ ပွဈမှားတတျလာသညျ။ ဗှီဒီယိုတှငျ ကွညျ့ရသညျ့ အမြိုးမြိုးသော လိုးနညျးမြားဖွငျ့ စိတျကူးလိုးနမေိသညျအထိ ဖွဈလာသညျ။ သို့သျောလညျး တက်ကသိုလျပညာ တဈပိုငျးတဈစ သငျဖူးထားသူမို့ အိနွေ်ဒပကျြအောငျ အငမျးမရ ဖွဈတာမြိုးတော့ မဖွဈ။
ရုပျမပကျြဘဲ စိတျကူးဖွငျ့ မှနျးပွီး ဇာတျလမျးဆငျကာ အရသာ ယူတတျသူသာဖွဈသညျ။ ကြျောညှနျ့မှာ ကွညျ့ပြျောရှုပြျောသော ရုပျရညျရှိပွီး ကိုယျခန်ဓာဖွငျ့ မွနျမာဆနျသူ လူငယျတဈဦး ဖွဈသညျ။ ဘကွီးလုပျသူ၏ စီးပှားရေး ပွလေညျမှုကွောငျ့ မခြို့မတဲ့ စားသောကျနထေိုငျရသူ ဖွဈရာ သူတောငျးစား ထမငျးဝလြှငျ လီးတောငျသညျ ဆိုသညျ့အတိုငျး အစားကောငျး အသောကျကောငျးမြားကို မတောငျ့မတ မကွောငျ့မကဘြဲ စိတျထငျသလို စားသောကျနနေိုငျသူ ကြျောညှနျ့တှငျ အမွဲတမျးလိုလို ကာမစိတျမြား ထကွှနတေတျသညျ။ ကွညျ့ထားသော ဗှီဒီယိုကားမြားကွောငျ့လညျးကောငျး၊ မွငျရတှရေ့သော ခပျတောငျ့တောငျ့ မိနျးမမြားကွောငျ့လညျးကောငျး ခဏခဏ လီးတောငျတောငျ နလေရှေိ့ရာ တဈနေ့ နှဈကွိမျခနျ့ ကိုယျ့ဘာသာ ဂှငျးတိုကျပွီး အာသာဖွနေရေသညျ အထိ ဖွဈနလေသေညျ။ လီးတောငျလှယျတတျမှုကွောငျ့ အိမျမှ အပွငျထှကျတိုငျး အတှငျးခံဘောငျးဘီ ဝတျပွီး စိတျကို ထိနျးထိနျးထားရလရော ၎င်းငျးအတှကျ ကြျောညှနျ့တှငျ အမွဲ စိတျသောက ဖွဈနရေသညျ။
လူပြိုလူလှတျမို့ ဖာခပြွီး အာသာဖွရေနျတော့ ကြျောညှနျ့ စိတျမကူး။ ဟိုလူလိုး၊ ဒီလူလိုးနှငျ့ ကွုံရာလူ အလိုးခံရသော မိနျးမကို သူ မသတီပေ။ ထို့ကွောငျ့ မိနျးမ လိုးခငျြစိတျ ပျေါပွီး လီးတောငျလာတိုငျး ကိုယျ့လကျနှငျ့ကိုယျ ဂှငျးတိုကျပွီး အာသာဖွလေေ့ ရှိသညျ။ ယခုလညျး နလေ့ညျက ကွညျ့ခဲ့သော အောကားထဲမှ စိတျထစရာ အကှကျမြားက ကြျောညှနျ့အား လီးမတောငျ တောငျအောငျ အားပေးသလို ဖွဈနလေသေညျ။ ဗှီဒီယိုကွညျ့ပွီး ပွနျလာလာခငျြး ဂှငျးတဈခြီ တိုကျခဲ့သျောလညျး အခု လီးထပျတောငျနပွေနျရာ ကြျောညှနျ့မှာ လီးတံကို လကျဖွငျ့ အသာကိုငျရငျး စိတျကူးနှငျ့ လိုးပှဲ ဖနျတီးနမေိသညျ။ မွငျရသူ ယောကျြားမြား ရမကျထစရာ တောငျ့တောငျ့တငျးတငျး မိနျးမမြားကို ပွနျလှနျ စိတျကူးဖွငျ့ မွငျယောငျရငျး သူ့တှငျ မရှိသေးသျောလညျး ရအောငျ ရှာကွံယူရနျ စိတျကူး နမေိသညျ။
မခငျမမှော ကြျောညှနျ့နှငျ့လညျး ခငျမငျနသေညျ။ တခွံနှငျ့တခွံ တဈအိမျနှငျ့တဈအိမျ ဝငျထှကျ သှားလာနကွေသညျအထိ ရငျးနှီးနကွေသညျ။ ဦးသာဒငျမှာ ကြျောညှနျ့ ဘကွီးနှငျ့ အလုပျ အတူတူ တှဲလုပျဖူးသူတဈဦး ဖွဈသျောလညျး အနညျးငယျတော့ အသကျငယျသညျ။ ကြျောညှနျ့ ဘကွီးတို့ လငျမယားမှာ အသကျ ခွောကျဆယျနီးပါး ရှိနကွေပွီ ဖွဈသညျ။ ယခုတော့ ဦးသာဒငျနှငျ့ အတူ တှဲပွီး အလုပျ မလုပျကွဘဲ သီးသနျ့သာ ကိုယျ့စီးပှားကိုယျ ရှာနကွေသူမြား ဖွဈသညျ။
မခငျမေ၏ ရှဘေိုမငျးကွိုကျ တောငျ့တငျး ဖွောငျ့စငျးသော ခန်ဓာကိုယျအား ဦးသာဒငျတဈယောကျ အဆီအသား ဝါးနခေဲ့သညျမှာ တဈနှဈခနျ့ ရှိပွီ ဖွဈသျောလညျး ယောကျြားနှငျ့ တညျ့သောသူမို့ ကသြှားသညျ မရှိဘဲ ပိုမို တောငျ့တငျးနလေရော ကြျောညှနျ့တို့ သူငယျခငျြးတဈသိုကျ ဆုံခိုကျ စကားစပျမိကွလြှငျ ….. “အဘိုးကွီးက တဏှာ ခပျကွီးကွီးပဲကှာ၊ မဖွိုနိုငျတာတော့ ဟုတျမယျ မထငျပါဘူး၊ မခငျမကေိုက ပိုပွီး တောငျ့လာတာ အဟီး …. ဒုသနသော ကွောကျလို့သာ၊ ရမြားရရငျ ဖွုတျခငျြစရာ ကောငျးတဲ့အထဲမှာ မခငျမပေါတယျကှ“ ဟု တဈယောကျကလညျး သူ့စိတျထဲ ရှိသညျ့အတိုငျး ထုတျပွောသညျ။
ကြျောညှနျ့ ကိုယျတိုငျလညျး အနီးအနားရှိ အပြိုအအိုမြားထဲတှငျ မခငျမလေို ယောကျြားမြား စှဲမကျစရာ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျမြိုး မရှိကွောငျး သိသညျ။ စိတျကူးထဲတှငျ လိုလားနသေော မိနျးမမှာ မခငျမလေို မိနျးမမြိုး ဖွဈသညျ။ “ကြျောညှနျ့ ငါတော့ မငျးလိုသာ ခွံခငျြး ကပျနရေငျ အဘိုးကွီးလာတိုငျး သှားသှား ခြောငျးတယျကှာ …. မငျး မခြောငျးဘူးလား“ သူငယျခငျြးဖွဈသူ စကားကွောငျ့ နဂိုက စိတျကူး မပျေါမိသော ကြျောညှနျ့မှာ ခြောငျးခငျြစိတျမြား ဖွဈပျေါလာရသညျ။ “အေးကှ …. မငျးဆို ဝငျခငျြသလိုဝငျ ထှကျခငျြသလိုထှကျလို့ ရနတော၊ ဘယျနရောက ခြောငျးရမယျဆိုတာ မသိဘူးလား ကြျောညှနျ့ရ“ ကနျြသူငယျခငျြး တဈယောကျက ထပျပွောသဖွငျ့ ဦးသာဒငျတို့ခွံနှငျ့ အိမျအနအေထားကို သိနသေော ကြျောညှနျ့အတှကျ အခှငျ့အရေး တဈခုလို မွငျယောငျလာမိသညျ။
သူငယျခငျြးမြားကို ဘာမှ ပွနျမပွောဖွဈလိုကျသျောလညျး စိတျကူးထဲတှငျ ခြောငျးရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျမိသညျ။ သညျနေ့ ဦးသာဒငျ ရောကျနကွေောငျး ကြျောညှနျ့ သိသညျ။ စောစောကပငျ ခွံထဲ၌ တှရေ့သညျ။ ယခုလောကျဆိုလြှငျတော့ အိပျယာဝငျလောကျပွီဟု အခြိနျနှငျ့ အခွအေနကေို တှကျဆရငျး တောငျနသေော လီးကို ခပျရှရှလေး ဆုပျနမေိသညျ။ ခပျလှမျးလှမျးမှ ည ၁၀ နာရီရှိပွီဖွဈကွောငျး သံခြောငျးခေါကျသံ ပျေါလာလရော ဦးသာဒငျတို့အား ခြောငျးရနျ စိတျကူးရှိနသေော ကြျောညှနျ့တဈယောကျ ခါတိုငျးလို မိနျးမလိုးပှဲကို စိတျကူးနှငျ့ နှဲကာ ဂှငျးတိုကျတတျသညျ့ အကငျြ့ကို အကောငျအထညျ မဖျောသေးဘဲ ကုတငျပျေါမှ အသာ ထလိုကျသညျ။ ခွံနှငျ့ အိမျအနအေထား အားလုံး သိနသေူမို့ လကျတှခြေ့ောငျးရနျ အကောငျအထညျ ဖျောနသေော ကြျောညှနျ့အတှကျ ငါးမိနဈခနျ့ အကွာတှငျ ဦးသာဒငျတို့ အိမျဘေးရှိ သူကွိုတငျ ရှာဖှထေားသော အိမျထဲကွညျ့၍ ရရနျ အပေါကျရှိသညျ့ နရောကို ရောကျသှားလပွေီ ဖွဈသညျ။ တဈထပျအိမျမို့ ကြျောညှနျ့ ကွညျ့ရနျ ပို၍ အဆငျပွေ နလေသေညျ။
“ဟငျ့အငျး …. ဟငျ့အငျး“ အသအေခြာ မွငျနိုငျသော နရောမို့ အိပျခနျးထဲရှိ ကုတငျပျေါတှငျ ဦးသာဒငျတို့ လငျမယား၏ အနအေထားနှငျ့ အခွအေနကေို သဲကှဲစှာပငျ ကြျောညှနျ့ မွငျနရေပပွေီ။ ဗှီဒီယိုတှငျ မွငျဖူးထားသျောလညျး ယခုလို သူကိုယျတိုငျ အခဈြပှဲနှဲမညျ့ မွငျကှငျးကို တဈခါမှ မကွုံဖူးသူမို့ ကြျောညှနျ့ ရငျတှေ ခုနျနလေသေညျ။ “ကှယျ …. သဲလေးကလညျးကှာ …. အဈကိုကွီး မဖွဈလို့ လုပျမပေးတာပါ၊ ကဲပါ …. ဒီဘကျ လှညျ့စမျးပါအုံး“ “ဟငျ့အငျး …. ဟငျ့အငျး“ တဈခုခု ပူဆာသညျကို မရ၍ သပိတျမှောကျနဟေနျဖွငျ့ ကုတငျစှနျးနားထ တိုးကာ ဦးသာဒငျအား ကြောပေးပွီး တဟငျ့ဟငျ့ လုပျနသေော မခငျမေ၏ နောကျမှ ကပျကာ ဖကျထားသော ဦးသာဒငျ၏ ခြော့နဟေနျကို ကြျောညှနျ့ အတိုငျးသား မွငျနေ ကွားနရေပွီ ဖွဈသညျ။
နှုတျခမျးနှဈခု ထိကပျနရောမှ ခှာလိုကျသညျတှငျ ပွှတျကနဲ အသံ ပျေါလာသလို တဈဦး၏ ပါးစပျထဲ တဈဦး၏ လြှာကို ထညျ့ပွီး ကလိနကွေပုံကလညျး ဗှီဒီယို၏ ကြေးဇူးကွောငျ့ ကြျောညှနျ့အတှကျ စိတျကနြေပျသှားရသညျ။ “အငျး …. အဘိုးကွီးတှကေလဲ ခတျေမီသားပဲ“ ဟု ခြီးကြူးလိုကျမိသညျ။ လြှာခွငျး ကလိနကွေသလို ဦးသာဒငျ၏လကျက မခငျမေ၏ နို့အုံကွီးမြားကို ညဝတျ အကငြ်္ီပျေါမှ ဆုပျကိုငျညှဈပေးနပွေနျသညျ။ ဦးသာဒငျ၏ လကျသညျ မခငျမေ၏ ကိုယျလုံးပျေါတှငျ အထကျအောကျ တျောတျော နှံ့အောငျ လြှောကျပွီး ပှတျသပျနပေုံကိုလညျးကောငျး၊ မခငျမေ၏ လကျက ဦးသာဒငျ၏ ပေါငျကွားထဲနှိုကျပွီး လီးကလို ဖမျးဆုပျနပေုံကို လညျးကောငျး စိတျတကျကွှစရာ ကြျောညှနျ့ မွငျနရေသညျ။ တဈဦးကို တဈဦး အတငျးဖကျပွီး ပှတျသပျ နှိုးဆှနရောမှ ဦးသာဒငျက ခှာလိုကျကာ သူ့ကိုယျရှိ အဝတျအစားမြား ဖယျနသေလို မခငျမကေလညျး ဝတျထားသော ညဝတျ အင်ျကြီကို ဖယျရှားလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ကြျောညှနျ့၏ မကျြလုံးမြား ပိုမို ပွူးကယျြသှားရသလို အသကျရှူသံမြား ပွငျးလာပွီး ရငျလညျး ပိုခုနျသှားရသညျ။ မခငျမေ၏ ကိုယျလုံးကို စိတျကူးနှငျ့ အဝတျအစား ခြှတျပွီး ကွညျ့ဖူးသျောလညျး ယခုကဲ့သို့ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျတုံးလုံး မမွငျဖူးသေးသူ ကြျောညှနျ့ တဈယောကျ အသကျရှူ မွနျလညျး မွနျစရာပငျ။
ဖွူဖှေးဝငျးဝါနသေော အသားက မီးရောငျအောကျတှငျ ဝငျးပနသေညျ။ တောငျ့တငျး ဖုထဈ ထှားအဈနသေော အသားဆိုငျမြားက အားရစရာပငျ။ တဈကိုယျလုံးတှငျ သူ့နရောသူ အဆငျပွစှော နရောယူထားကွသညျမှာ ကြျောညှနျ့၏ ရငျမြားအား ပူစလေသေညျ။ မိမှေးတိုငျး ဖမှေးတိုငျးနှငျ့ မွငျရသူ ယောကျြားမြား စိတျထခငျြစရာ ကောငျးသော မခငျမေ၏ ကိုယျလုံးကွီးအား အငမျးမရပငျ ကြျောညှနျ့ ကွညျ့နမေိသညျ။ ဖွူဖှေးသော အသားအရနှေငျ့ လိုကျအောငျ ကိုယျလုံးမှာ ပွညျ့တငျးလှသညျ။ လုံးကွီးပေါကျလှ မိနျးမမို့ ထှားအယျနသေော ကိုယျလုံးပျေါတှငျ မို့အိအယျကားလှသညျ့ နို့အုံကွီး နှဈလုံးကလညျး ကိုယျအထကျပိုငျးတှငျ ထငျရှားလကျြရှိသညျ။ ပွနျ့ပွူးသော ဝမျးပွငျ၊ ခကျြ ခှကျခှကျလေးနှငျ့ ဆီးခုံ ပွနျ့ကားကား အထကျရှိ မဲနကျနသေော အမှေးမြားက ပွညျ့တငျးကာ ဖွောငျ့စငျးနသေော ပေါငျတံကွီး နှဈခြောငျးအရငျး ဆကျရာ အပျေါကွားတှငျ ထငျထငျရှားရှား …. ကိုယျလုံးကို အငွိမျမနဘေဲ ဟိုဘကျ ဒီဘကျ လှုပျရှားပွီး ပေါငျတံကွီးမြားအား ပူးကပျထားကွသဖွငျ့ ပေါငျခှကွားတှငျ ညပျနသေော စောကျဖုတျအုံကို ထငျထငျရှားရှား မမွငျရ၍ ကြျောညှနျ့မှာ အားမလို အားမရ ဖွဈနသေညျ။
စောကျဖုတျကို မမွငျရသျောလညျး အလုံးလိုကျ အခြောငျးလိုကျနှငျ့ ကွီးထှား ထညျဝါနသေော ပေါငျတံ ဖွိုးဖွိုးကွီးမြား၊ ပွညျ့ဖူးသော ဒူးခေါငျး၊ တငျးရငျးနသေော ခွသေလုံးမြားနှငျ့ အခြိုးအစားကလြှသညျ့ ကိုယျလုံး အဆကျအပေါကျကွီးက ကြျောညှနျ့အား တံတှေး သီးနစေလေသေညျ။ မခငျမေ၏ ကိုယျတုံးလုံး ဖွဈနသေော ကိုယျလုံးကွီးမှာ တကယျပငျ အားရစရာ …. စိတျထခငျြစရာ …. လိုးခငျြစိတျမြား ခြိုးနှိမျ၍ မရလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျနပေသေညျ။ ထိပျပွောငျပွောငျ ဘိုကျရှဲရှဲနှငျ့ ဦးသာဒငျ၏ ကိုယျလုံးမှာလညျး အဝတျအစားမဲ့နပွေီ ဖွဈရာ သူလညျး အလုံးအထညျ မသေးလှပေ။ သို့သျော ပေါငျကွားထဲရှိ လီးတံမှာ ထဟနျ မတူသေးမှုကွောငျ့ ကြျောညှနျ့မှာ အားမလို အားမရ ဖွဈနမေိသညျ။ ပြော့ခှနေဟေနျရှိသော လီးတနျကွီး၏ အရှညျနှငျ့ လုံးပတျမှာ ခွောကျလကျမ သာသာလောကျနှငျ့ ကပျြလုံးသာသာလောကျ ရှိမညျဟု တှေးနမေိသညျ။ “ကှယျ …. အဈကိုကွီးရယျ“ ကိုယျတုံးလုံး ဖွဈသှားကွသညျနှငျ့ ခုံးထမောကျဖွိုးနသေော နို့အုံကွီး နှဈလုံးအား တဈလုံးကို လကျဝါးထဲထညျ့ကာ ဆုပျခပြှေတျသပျရငျး ကနျြတဈလုံးကို ပါးစပျနှငျ့ ကုနျးစုပျနသေော ဦးသာဒငျကွောငျ့ မခငျမေ၏ နှုတျဖြားမှ ခပျတိုးတိုး ညညျးသံလေး ပျေါထှကျလာရသညျ။
“အား … လား … လား … အိုး ….. အဈကိုကွီး“ ဆတျကနဲ တှနျ့သှားသော မခငျမနှေငျ့အတူ ကြျောညှနျ့၏ ကိုယျလုံးကွီးမှာလညျး အိမျနံရံနှငျ့ ပိုမို ကပျသှားရသညျ။ ဗှီဒီယိုထဲတှငျ ထိုကဲ့သို့ နှိုးဆှမှုကို မွငျဖူးပွီဖွဈသျောလညျး မွနျမာနိုငျငံသားမြား လုပျရဲဟနျ မတူဟုသာ ထငျနသေော ကြျောညှနျ့အတှကျ ဦးသာဒငျ၏ အပွုအမူမှာ ထူးဆနျးအံ့သွဖှယျရာ ဖွဈသှားရသညျ။ စိမျပွနေပွပေငျ ခုံးမောကျကွှတကျနသေော စောကျပတျပွငျကွီးအား လြှာဖွငျ့ ပငျ့ပငျ့ ရကျနပေုံမှာ အားပါးပါး …. အားရစရာပငျ။ ရကျအားပါသလောကျ မခငျမမှောလညျး ထိထိရောကျရောကျ ခံစားနရေဟနျ တူသညျ။ မကွာမီ မခငျမေ၏ စောကျပတျကို ရကျပေးနသေူ ဦးသာဒငျ၏ ကိုယျလုံးကွီး မှယေ့ာပျေါတှငျ ပကျလကျဖွဈသှားသညျ။
ထိုအခါ မခငျမကေ ထပွီး ပေါငျခွံထဲတှငျ ပြော့ခှနေသေလို ဖွဈနသေော လီးတံ ရှညျရှညျကွီးအား ပါးစပျနှငျ့ အသာငုံပွီး စုပျပေးလိုကျသညျ့အတှကျ အမွငျအာရုံသာ ရှိနသေျောလညျး ကြျောညှနျ့တဈယောကျ ကိုယျတိုငျ ခံစားလိုကျရဟနျဖွငျ့ ကိုယျလုံးတှနျ့သှားရသညျ။ ဦးသာဒငျတို့ လငျမယားသညျ ခတျေမီသူမြား ဖွဈကွောငျး ကြျောညှနျ့ မကျြမွငျ သိသှားလပွေီ။ တဈဦးကိုတဈဦး ကာမစိတျမြား နှိုးဆှပေးသညျမှာ မွနျမာ့ဓလထေ့ကျ လှနျကဲပွီး အနောကျတိုငျး အယူအဆမြားဖွငျ့ မရှံမရှာပငျ လုပျကိုငျပေးနကွေသညျ။ တဈဦးပွီးမှ တဈဦးက ပွနျလုပျပေးခွငျးမှ ပကျလကျအိပျပေးလိုကျသော မခငျမပေျေါ ပွောငျးပွနျမှောကျကာ လီးအစုပျခံရငျး စောကျပတျကို အားပါးတရ ရကျပေးနပေုံက မွနျမာလငျမယားမှ ဟုတျပါလစေဟု ကြျောညှနျ့ တှေးနမေိသညျ။ ဦးသာဒငျတို့ လငျမယား၏ ကာမဂုဏျ ခံစားမှုမှာ လှနျလှနျကဲကဲ ဖွဈနကွေလရော ကြျောညှနျ့မှာ ဦးသာဒငျအစား အစုပျခံခငျြစိတျမြား ဖွဈပျေါမိသညျ။
ဦးသာဒငျလိုးသမြှ စိတျတူကိုယျတူ ပွနျလညျပွီး လှုပျရှားနသေော မခငျမေ၏ ရမကျထနျပုံကို လညျးကောငျး၊ အသကျကွီးနပွေီ ဖွဈသျောလညျး မိနျးမ တဈယောကျအား လူငယျမြားထကျပငျ အပငျပနျးခံကာ လိုးနိုငျပွီး အလိုးကြှမျးကငျြလှသော ခပျကွာကွာ အမြိုးမြိုး လိုးနိုငျသော ဦးသာဒငျ၏ ကြှမျးကငျြမှုကို လညျးကောငျး ကြျောညှနျ့ အသိအမှတျ ပွုမိသညျ။ သို့သျော တဈခု အားမရသညျကတော့ လီးတံရှညျရှညျ အလုံးကွီးကွီး၏ ပြော့ခှနေမှေုကိုတော့ ကြျောညှနျ့ သဘောမကမြိ။ သူ့လီးလိုပငျ သံခြောငျးတဈခြောငျးလို မာကြောနသေညျ့ အနအေထားမြိုးဖွငျ့ တှမွေ့ငျခငျြမိသညျ။ သို့သျော အစားကောငျးကောငျးမြားနှငျ့ အားဆေးအမြိုးမြိုးသုံးပွီး မယားကွီး တဈလှညျ့၊ မယားငယျ တဈလှညျ့ မပွတျတမျး လိုးနနေိုငျသော ဦးသာဒငျကို ကြျောညှနျ့ အထငျကွီးမိသညျ။ သူဆို ဒီလောကျလိုးနိုငျစှမျးမရှိနိုငျခြေ။
သူမြား လငျမယားလိုးတာ ခြောငျးကွညျ့ရငျး ကြျောညှနျ့ သုတျနှဈခါထှကျပွီးသညျ အထိ ဖွဈသှားရသညျ။ ပုံစံအမြိုးမြိုး ပွောငျးလိုးပုံကို ကွညျ့ရငျး လိုးကာစမှာ တဈခါ သုတျထှကျသှားရပွီး ကွညျ့ရငျးကွညျ့ရငျး လီးထပျတောငျလာမှုကွောငျ့ နောကျတဈခါ ထပျပွီး သုတျထှကျသညျအထိ ဂှငျးတိုကျမိလိုကျသညျကိုတော့ ကြျောညှနျ့ မတေ့ော့မညျ မဟုတျပေ။ အားပါးတရ လိုးပှဲ နှဲပွီးသှားသော ဦးသာဒငျတို့ လငျမယား၏ တယုတယ လုပျနကွေပုံနှငျ့ အနားယူသညျအထိ ကွညျ့ပွီးနောကျ ကနြေပျစှာ ကွညျ့ခဲ့ရသော လိုးပှဲကို ကြောခိုငျးသှားခြိနျမတော့ ကြျောညှနျ့ ဒူးခေါငျးမြား ခြောငျသလိုဖွဈကာ သူ့တဈကိုယျလုံး နုံးသှားရခွငျးကလညျး ကြျောညှနျ့အတှကျ ထငျရှားနမေညျ့ အတှအေ့ကွုံပငျ ဖွဈပတေော့မညျ။ တဗှမျးဗှမျးနှငျ့ ရလေောငျးခြိုးလိုကျ ဆပျပွာတိုကျလိုကျ ခြေးတှနျးလိုကျနှငျ့ မခငျမေ အလုပျရှုပျနသေလို ကြျောညှနျ့မှာလညျး ကုနျးလိုကျ ကှလိုကျ ဟိုဒီလှညျ့လိုကျနှငျ့ ကိုယျဟနျ အမြိုးမြိုးဖွဈနသေော မခငျမအေား ကွညျ့ရငျး အလုပျရှုပျနပေသေညျ။
မိနျးမ မလိုးရဘဲ ကိုယျ့လကျနှငျ့ကိုယျ ဂှငျးတိုကျပွီး သုတျ ထုတျနရေမှုကို ရပျကာ တကယျ့ မိနျးမ တဈဦးအား ခပျရဲရဲ ပူးကပျ ကွံစညျလြှငျ သူကွုံခငျြနသေညျ့ အလိုး အတှအေ့ကွုံကို ရလိမျ့မညျဟု တှေးရငျးက မခငျမလေို ခပျထထ မိနျးမ တဈဦးမှာ လငျနှငျ့ တဈပတျလောကျ ကငျးကှာနမှေုကွောငျ့ ကာမ အရသာကို တောငျ့တနလေိမျ့မညျဟု ခနျ့မှနျး တှေးနမေိသညျ။ အခွအေနကေို ကိုယျ့ဘကျကိုယျဆှဲပွီး ခပျရဲရဲ တှေးရငျး ခြီတုံခတြုံ ဖွဈနသေော ကြျောညှနျ့တဈယောကျ သူ့အိပျယာဘေး စားပှဲပျေါ၌ ၈-လကျမ အသှားရှိသော ဓားမွှောငျတဈခြောငျးကို တှလေို့ကျရာမှ စိတျကူးတဈခု သူ့ခေါငျးထဲတှငျ ထငျးကနဲ ဖွဈပျေါသှားရသညျ။ ထိုဓားမွှောငျကို ယူပွီး အိမျပျေါက ခပျသုတျသုတျ ဆငျးခဲ့လတေော့သညျ။ “ဒေါကျ … ဒေါကျ“ “ဘယျသူလဲ“ “ကြှနျတျောပါ …. မခငျမနေဲ့ ခဏလောကျ စကားပွောခငျြလို့“ စိတျကူးတဈခုကို အကောငျအထညျဖျောရနျ ရဲစိတျအားကိုးပွီး ထှကျလာသော ကြျောညှနျ့က မခငျမတေို့ အိမျတံခါးကို အသာခေါကျရငျး ပွနျပွောလိုကျသညျ။
ကြှီကနဲ မွညျသှားပွီး ပိတျထားသော တံခါး ပှငျ့သှားသညျ။ “လာလေ ကြျောညှနျ့ ….. ထူးထူးဆနျးဆနျး ဘာမြား ပွောစရာ ရှိနလေို့လဲ …. ကဲ ဝငျတော့လေ“ သူ့အား တံခါး ဖှငျ့ပေးရငျး အနီးကပျ ပွောဆိုနသေော မခငျမကေို မွငျနရေသော ကြျောညှနျ့၏ တဈကိုယျလုံး ရာဂသှေးမြား ဖွုနျးကနဲ ဆူဝတေကျသှားရသညျ။ ရခြေိုးပွီး သနပျခါးလိမျးစလေးသာ ရှိသော မခငျမေ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ရငျလြားထားသော ထဘီ တဈထညျမှလှဲပွီး ဘာမှ ရှိမနပေေ။ ထို့ကွောငျ့ ဝငျးဝါပွညျ့တငျးသော အသားမြားနှငျ့ စညျးနှောငျဖုံးလှမျးထားသော လုံခညျြအောကျမှ ထငျရှားနကွေသညျ့ အသားဆိုငျမြားကို မွငျနရေသညျ။ ထို့အပွငျ မခွောကျတခွောကျကလေး ဖွဈနသေော လိမျးပွီးစ သနပျခါးနံ့လေးမြားက ကြျောညှနျ့ နှာခေါငျးထဲသို့ ခပျမှေးမှေး တိုးဝငျနပွေီး ဖွဈရာ စောစောက ပွနျပြော့သှားသော လိငျတံကွီးမှာ သိသိသာသာပငျ ပုဆိုးအတှငျးဝယျ ထောငျထလာလတေော့သညျ။
မုနျယိုနပွေီဖွဈသော ရာဂစိတျကို ထိနျးရငျး အိမျထဲဝငျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ တံခါး ပွနျပိတျလိုကျသညျ့ မခငျမေ၏ နောကျမှနကော မခငျမေ၏ နောကျပိုငျးအလှအား ခပျရဲရဲ စူးစိုကျကွညျ့လိုကျသညျ။ တဟုနျထိုး ကွှနသေော ရမ်မကျစိတျမြား ကြျောညှနျ့တှငျ ပိုမို ဖွဈပျေါနလေပွေီ။ “ဟဲ့ …. အို နငျ ဘာဖွဈလို့ ငါ့ကို ဒီလောကျ ကွညျ့နရေတာလဲ“ ရုတျတရကျ နောကျပွနျလှညျ့လိုကျသော မခငျမမှော သူမ၏ ကိုယျလုံးကွီးအား အငမျးမရ စူးစိုကျကွညျ့နသေော ကြျောညှနျ့ကွောငျ့ လနျ့သှားရသညျ။ ထို့အပွငျ ပုဆိုးအတှငျးမှ ထိုးထိုးထောငျထောငျ ဖွဈနသော အရာမှာ သိသာ ထငျရှားနလေရော ထိုအရာ ဘာမှနျး သိနသေူ မခငျမအေတှကျ အံ့သွ ထိတျလနျ့စိတျမြား ဖွဈပျေါသှားရသညျ။ “ကြ …. ကနြျော မနနေိုငျတော့ဘူး မခငျမေ …. မခငျမကေို ခဈြခငျြလို့“ သမေထူး နမေထူးဟု ဆုံးဖွတျထားသော သူတို့ ပုံစံအတိုငျး စိတျကို ဒုံးဒုံးခခြဲ့ပွီ ဖွဈသော ကြျောညှနျ့က သူယူလာသော ဓားမွှောငျကို ခါးနောကျမှ အသာဆှဲယူလိုကျရငျး ပွောလိုကျသညျ။
ခကျြကလေးကို လြှာဖွငျ့ ထိုးကလိနရောမှ ဆီးခုံပျေါ မကျြနှာရောကျလာကာ မထူမပါးလေး ပေါကျနသေော စောကျမှေးမြားကို အသာကြျောပွီး အမွှောငျးလိုကျ ခုံးထဖောငျးကွှနသေော စောကျပတျအုံကွီးကို အနီးကပျ ကွညျ့လိုကျသညျ။ မိနျးမစောကျပတျအား ဗှီဒီယိုထဲနှငျ့ မခငျမအေား ခြောငျးကွညျ့ဖူး၍ အဝေးမှသာ မွငျဖူး နသေူ ကြျောညှနျ့မှာ ကွီးမား ဖွောငျ့တနျးလှသော ပေါငျတံဖွူဖွူကွီး နှဈခြောငျးအရငျးတှငျ ကပျလကျြ ထငျထငျရှားရှား ခုံးထနသေော လကျဝါးတဈအုပျစာမြှ ရှိသညျ့ မခငျမေ၏ စောကျပတျကွီးအား ရငျတုနျပနျးတုနျနှငျ့ပငျ အသအေခြာ စိုကျကွညျ့နမေိသညျ။ စောစောက ရခြေိုးထားသျောလညျး တဈခါမှ မတို့မထိဖူး၍ ဗွုနျးကနဲ တို့ထိရမှာ ကြျောညှနျ့ ရှံ့နမေိသညျ။ သို့သျောလညျး မခငျမေ၏ စောကျပတျအုံကွီးမှာ စောကျမှေးမြား မရှိဘဲ ဆီးခုံတှငျသာ အမှေးရှိခွငျးကွောငျ့ အနီးကပျ ထငျထငျရှားရှား မွငျနရေလရော ပွဲအာနသေော အကှဲကွောငျးကိုလညျးကောငျး၊
အကှဲကွောငျးဘေးရှိ လကျနှဈလုံးသာသာခနျ့ ခုံးထပွီး အမွှောငျးဖွဈနသေော စောကျပတျနှဈခမျးသား နှဈခုကိုလညျးကောငျး၊ အကှဲကွောငျးပျေါရှိ ခပျမို့မို့ဆီးခုံပွငျကိုလညျးကောငျး၊ နောကျဘကျသို့ ကကြသြှားသဖွငျ့ ဖငျနှငျ့ ပေါငျတံကွီး နှဈခုကွားတှငျ အသားတုံးကလေး နှဈခု ကပျထားသလိုဖွဈနလေသေညျ။ ကြျောညှနျ့သညျ မခငျမေ၏ တငျပါးအုံကွီး နှဈလုံးအောကျကို သူ့လကျထိုးသှငျးလိုကျကာ ဆုပျနယျ ပှတျသပျပေးရငျး စောကျပတျ ဖောငျးဖောငျးကွီးအား ကွညျ့နရောမှ ဗှီဒီယိုထဲနှငျ့ ဦးသာဒငျ လုပျသလို လြှာဖွငျ့ယကျပေးရ ကောငျးမလားဟု စဉျးစားလိုကျမိသညျ။ မလုပျဖူးသေးသဖွငျ့ ရှံသလိုလညျး ဖွဈနသေညျ။
“အား … အိုး … ကြျောညှနျ့ …. အိုး … အား အား“ ကြျောညှနျ့၏ စောကျပတျယကျပေးမှုက အလှနျ ထိရောကျပွငျးထနျလှပရော အယကျခံနရေသူ မခငျမေ၏ နှုတျဖြားမှ ညညျးသံစုံ ထှကျပျေါနပွေီး ပေါငျတံ ဖွိုးဖွိုးကွီးမြားကို လှုပျယမျးလိုကျ၊ ဖငျဆုံအိအိကွီးမြားကို ပငျ့လိုကျ၊ ခါးနှဲ့နှဲ့လေး ဖယျယမျးလိုကျနှငျ့ အရူးအမူးဖွဈနလေသေညျ။ စောကျပတျအုံကွီးကို အထကျအောကျ ပငျ့ယကျလိုကျ၊ အကှဲကွောငျးထဲ လြှာထိုးသှငျး ကလိလိုကျ၊ စောကျစခြေှ့နျခြှနျ မာတာတာလေးကို နှုတျခမျးနှငျ့ ဖိပွီး ပှတျခလြေိုကျ လုပျရငျး ကြျောညှနျ့က သူ့လကျကို မခငျမေ၏ ပေါငျတံလုံးလုံးကွီးမြားအား ပှတျသပျပေးမိသညျ။ တငျပါး ဆူထှားထှားကွီးမြားမှာလညျး မလှတျ၊ ထိုမှ အပျေါဘကျတှငျ ရှိသော နို့အုံ အိအိကွီးမြားကို လှမျးပွီး မမိတမိကိုငျကာ နို့သီးကလေးမြားအား လကျညှိုးနှငျ့ လကျမကွား ညှပျပွီး ပှတျခပြေေးနပွေနျရာ မခငျမေ တဈယောကျ မှရေ့ာပျေါဝယျ တလူးလူး တလှနျ့လှနျ့၊ တအီးအီး တအငျ့အငျ့နှငျ့ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ ဖွဈနလေသေညျ။ တျောတျောလေးကွာအောငျ ယကျပေးနသေောကွောငျ့ စောကျပတျအတှငျးမှ စိုရှဲကလြာသော ခြှဲပွဈသညျ့ရမြေားကို ကြျောညှနျ့ သတိပွုမိသညျ။
တဏှာပိုးမြား ထကွှနမှေုကွောငျ့ မရှံမရှာယကျပွီး မြိုခမြိသညျအထိ ဖွဈသှားရသညျ။ စောကျပတျအုံကွီးအား ယကျနရောမှ ပေါငျတံဖွိုးဖွိုးကွီးပျေါ ပါးစပျတငျကာ တရစပျ ယကျပေးရငျး ဒူးခေါငျးနားရှိ ထမီအား လှတျလှတျကြှတျကြှတျဖွဈအောငျ ဆှဲခြှတျလိုကျလတေော့သညျ။ ယခုအခါ မခငျမေ၏ တဈကိုယျလုံး မညျသညျ့အဝတျအစားမှ ဖုံးကှယျမထားတော့ဘဲ မိမှေးတိုငျး ဖမှေးတိုငျး ဖွဈသှားရလပွေီ။ ဘာမှ မရှိတော့သော မခငျမေ၏ ကိုယျလုံးကွီးအား ဒူးထောကျကာ အပျေါမှဆီးကွညျ့နရေငျးမှ ကြျောညှနျ့သညျ သူ့ခါးတှငျရှိသော ပုဆိုးကို ခြှတျလိုကျသညျ။ ပုဆိုးခြှတျပွီး အပျေါပိုငျးရှိ စှတျကယျြပါ ခြှတျလိုကျသောအခါ နှဈဦးစလုံး ကိုယျတုံးလုံးနှငျ့ သဘာဝအတိုငျး ဖွဈနကွေလတေော့သညျ။
ပေါငျကွားတညျ့တညျ့ကို လီးထောကျပွီး နို့အုံပျေါတှငျ လကျတငျကာ မကျြနှာပျေါ အပျထားလိုကျပွီဖွဈ၍ ကြျောညှနျ့မှာ ကုနျးကုနျးကှကှကွီး ဖွဈနလေသေညျ။ နရောပွငျနသေော ကြျောညှနျ့အား မခငျမကေလညျး ဝိုငျးကူလုပျပေးလိုကျသညျ။ သူမ၏ စောကျပတျအုံပျေါ ဖိထောကျနသေော လီးတံကွီးအား လကျတဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျကာ စောကျပတျအဝကို အသာတပေ့ေးလိုကျရာ အပျေါမှဖိပွီး လှုပျရှားရနျပွငျနသေော ကြျောညှနျ့တဈယောကျ စိတျလှုပျရှားမှုမြား ပိုမြားလာပွီး လီးတံကွီးအား ဖိခလြိုကျလတေော့သညျ။ အိကနဲ တိုးဝငျသှားသော လီးတံကွီးကွောငျ့ သူမ၏ လကျကို မခငျမကေ လှတျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောညှနျ့မှာတော့ ယခုမှ ပထမဆုံး မိနျးမစောကျပတျထဲ လီးဝငျရခွငျးဖွဈရာ ဝငျမှနျးသိသညျနှငျ့ အားစိုကျပွီး ဖိထိုးသှငျးနမေိသညျ။ လီးတံမှာ မခငျမေ၏ စောကျပတျအုံထဲသို့ တဝကျလောကျသာ ဝငျနသေျောလညျး ကြျောညှနျ့အတှကျမူ အနခေကျသလို ဖွဈနလေသေညျ။
စောကျပတျထဲ တဈခါမှ မဝငျဖူးသေးသော လီးတံကွီးမှာ ပူပူနှေးနှေး အိအိစကျစကျနှငျ့ အသားနုမြားက တဈဆို့ဆို့ လုပျပေးနမှေုကွောငျ့ ထူးခွားသလို ဖွဈနရေသညျ။ ဦးသာဒငျက ခဏခဏ လိုးထားသော မခငျမစေောကျပတျကွီးမှာ သူအတငျးထိုးသှငျးတာကို အဆုံးထိမဝငျဘဲ ခပျကွပျကွပျနှငျ့ ဖွဈနလေရော ကြျောညှနျ့မှာ အံ့အားသငျ့နမေိသညျ။ ထပျပွီး ကြျောညှနျ့ သတိပွုမိသှားသညျကတော့ သူ့လီးတံကွီး အဆုံးထိလညျး သှငျး၍ မရသေး၊ အပျေါမှဖိပွီး ဆောငျ့သှငျးရခကျြကလညျး လေးငါးခကျြမြှသာ ရှိသေးခြိနျတှငျ သုတျထှကျခငျြသလို ဖွဈနခွေငျးပငျဖွဈသညျ။
မခငျမေ၏ ခြိုငျးကွားမှ လကျကို သှငျးပွီး မကျြနှာခငျြးထပျကာ နှုတျခမျးကို စုပျရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပေးရမှု မကွာသေးဘဲ ပွီးခငျြသလို ဖွဈနခွေငျးအတှကျ ကြျောညှနျ့ မကနြေပျ၊ သို့သျော သူ ဘာမှလညျး မလုပျတတျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ့အား အောကျမှ ခပျတငျးတငျး ပွနျဖကျထားရငျး ပငျ့ကော့ပေးနသေော မခငျမကေို ပါးခွငျးအပျဖိထားလိုကျရာမှ တငျပါးကိုမွှောကျပွီး ဆကျဆောငျ့လိုကျမိသညျ။ “ အား … အား … အား … “ မခငျမေ၏ ညညျးသံမဟုတျ၊ သုတျမြား ပနျးထှကျသှားပွီဖွဈသော ကြျောညှနျ့၏ ညညျးသံသာ ဖွဈသညျ။ လီးသှငျးပွီး ဆယျခကျြခနျ့သာ ဆောငျ့ရသေးသညျ သုတျရညျမြား ပနျးထှကျသှားပွီမို့ ကြျောညှနျ့မှာ သူ့ကိုယျသူ အံ့လညျး အံ့သွ၊ မကလြေညျး မကနြေပျဖွဈသှားရသညျ။ သူကွညျ့ဖူးသော ဗှီဒီယိုထဲတှငျ ပုံစံလေးငါးမြိုး ပွောငျးပွီး အားရပါးရလိုးပွီးမှ သုတျထှကျသှားကွသညျ။ ဆောငျ့ခကျြမြားကို တဈခါတဈခါ သူရတှေကျကွညျ့ရာ အခကျြ ၁၀၀ ကြျော ၂၀၀ လောကျမှ ပွီးတတျကွပုံနှငျ့ တခြို့သရုပျဆောငျမြားဆိုလြှငျ စောကျပတျကိုလိုးနရောမှ လီးတံကိုထုတျပွီး မိနျးမ သရုပျဆောငျ ပါးစပျထဲဆကျသှားကာ အစုပျခံကွတာတောငျ ခကျြခငျြးသုတျမထှကျ အတျောကလေး ကွာမှ ထှကျသှားကွသညျ။
စောကျပတျကို လိုးသညျမှာလညျး တဈဆုံးဝငျအောငျ လိုးတတျကွရာ ကွညျ့သူတိုငျး မရိုးမရှဖွဈသျောလညျး အားတော့ရကွသညျ။ မလိုးမီ လီးအစုပျခံ၊ ဂှငျးအတိုကျခံ အခကျြ ၁၀၀ ကြျော ၂၀၀ ဆောငျ့လိုးပွီး ခကျြခငျြး သုတျမထှကျမှုကို မွငျဖူးသော ကြျောညှနျ့မှာ ယခုသူ့တှငျ ဘာခြှတျယှငျး၍ သုတျထှကျ မွနျရကွောငျး ကြျောညှနျ့ မသိ။ လောလောဆယျ ကြျောညှနျ့ သိသညျကတော့ ဆယျခကျြလောကျ ဆောငျ့ပွီး လီးတဈဝကျ တဈပကျြဖွငျ့ တဈခြီပွီးသှားရခွငျးကို အားမရဘဲ လီးတံကဉျြနသေညျ့ကွားက ဆကျဆောငျ့နမေိတော့သညျ။ လူပြိုကလေးမို့ သုတျထှကျမွနျမှုကို မခငျမသေိသျောလညျး ခနလေးပွီးသှားပုံကိုတော့ မကွိုကျ၊ သို့သျော သုတျထှကျပွီးတာတောငျ မနားဘဲ ဆကျဆောငျ့လိုးနသေညျ့ ကြျောညှနျ့အား မီရာကို ပွနျဖကျရငျး အောကျမှ ပငျ့ပငျ့ပေးမှုတော့ မခငျမေ လုပျပေးမိသညျ။
မခငျမေ၏ ကိုယျနံ့နှငျ့ နူးနူးညံ့ညံ့ အိအိစကျစကျ အတှထေူ့းလှသော အသားဆိုငျမြားက အတှအေ့ကွုံ မရှိသေးသူ ကြျောညှနျ့အတှကျ စိတျရောလူပါ ဘယျလိုမှ ထိနျးလို့မရအောငျ ဖွဈနရေပါသညျ။ ထှေးအိသော ကိုယျလုံးကွီးအား အတငျးဖကျထားရငျး သူထှကျသှားသော သုတျရညျမြားဖွငျ့ ခြောကြိနသေော စောကျပတျအုံထဲသို့ အတငျးဆောငျ့ပွီး ဆီးခုံခငျြး ကပျသညျအထိ လီးတံကွီး အကုနျသှငျး၍ ရမှုတော့ ကြျောညှနျ့ ကနြေပျမိသညျ။
စောကျပတျအတှငျးမှ ထူးခွားသော အတှအေ့ထိက အရိုငျးသကျသကျသာ ရှိသော ကြျောညှနျ့အား စိတျလှုပျရှားလာစသေညျ။ ပထမတဈခါ ထှကျပွီးသညျမှာ သိပျမကွာသေးသျောလညျး ဆကျဆောငျ့ခကျြ ၁၀၀ သာသာတှငျ မထိနျးနိုငျဖွဈကာ ဒုတိယမွောကျ သုတျရညျမြား ပနျးထှကျပွီး ပွီးသှားလတေော့သညျ။ “ အား … အား …အား “ သုတျရညျမြား ပနျးထှကျလကျြပငျ ခပျပွငျးပွငျးဖိဆောငျ့ရငျး တအီးအီးနှငျ့ ဖွဈသှားသညျအထိ ဆကျဆောငျ့ပွီးနောကျတော့ ကြျောညှနျ့တဈယောကျ မခငျမကေိုယျပျေါတှငျ ပြော့ခှသှေားလတေော့သညျ။ လီးတံကွီးမှာလညျး သုတျနှဈခါ ဆကျတိုကျနီးပါး ထှကျသှားရသဖွငျ့ ကဉျြပွီး ကြိနျးသှားရသညျ။ ပွီးတော့ ထငျထားသလို အီဆိမျ့သှားမှုက ဒငျပွညျ့ကပျြပွညျ့ မဖွဈဘဲ လူသာနုံးသှားရမှုကွောငျ့ ဘာမှ နားမလညျနိုငျအောငျ ဖွဈနမေိသညျ။ မခငျမေ ကိုယျပျေါတှငျပငျ ဆကျဖိထားရငျးက စောကျပတျထဲမှ လီးမထုတျဘဲ မှိနျးနရေငျး စဉျးစားနမေိသညျ့ ကြျောညှနျ့အား မခငျမတေဈယောကျ အတျော သညျးခံနရေသညျ။ သူ့မှာ ခံကောငျးတုနျးသာ ရှိသေးသညျ။ အတှအေ့ကွုံရငျနသေူမို့ တဈခြီတဈခြီ နာရီဝကျနီးပါးလောကျပငျ ခံနိုငျနပွေီဖွဈရာ ယခုကြျောညှနျ့ အခကျြ ၁ဝဝလောကျနှငျ့ ငါးမိနဈနီးပါးလောကျသာ ဆောငျ့လိုးနိုငျမှုကို ဘယျလိုမှ သူမ ကနြေပျစရာ မရှိပေ။ တဈခုပဲ သူမ ကနြေပျတာရှိသညျ။
ထိုကနြေပျမှုမှာ ကြျောညှနျ့၏ လီးတံကွီး မာတငျးတငျးနှငျ့ ထိထိမိမိ ခံစားရမှုပငျဖွဈသညျ။ ကာမအရသာ ခံစားရသညျမှာ မာတငျးပူနှေးနသေော လီးတံဖွငျ့ စောကျပတျအတှငျးသားမြားကို နာနာပှတျတိုကျပေးမှုပငျ။ ဦးသာဒငျလီးလို ပြော့သလိုလို မဟုတျဘဲ ခြိုးမရ ကှေးမရအောငျ မာတငျးနသေညျ့ လီးဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျး အလိုးခံလိုကျရမှုက မခငျမအေား သဘောကစြလေသေညျ။ “ ဘယျလိုလဲ ကိုလူပြိုရယျ၊ ခဏလေးနဲ့ နှဈခြီပွီးသှားပွီ မဟုတျလား … စိတျလေးဘာလေး ထိနျးပွီး လုပျမှပေါ့ အခုတော့ မောနပွေီထငျတယျ “ မခငျမကေ အနညျးငယျ မကနြေပျစိတျဖွငျ့ သူမကိုယျပျေါ ဖိပွီး မှိနျးနသေော ကြျောညှနျ့အား ပွောလိုကျသညျ။ “ အငျး … ဘယျလိုကွီးမှနျး မသိဘူး … ထိနျးလို့မရလိုကျဘူး ဖွဈသှားတယျ … မခငျမေ မပွီးသေးဘူး မဟုတျလား … “
“ အငျးပေါ့ … ကဲပါ အမောဖွပေါအုံး … နောကျဆိုရငျ ဒီလောကျ မလောနဲ့ … ဖွညျးဖွညျးသှားမှပေါ့ … မကွားဖူးဘူးလား … ပညာသငျတာတို့ … စီးပှားရှာတာတို့ … ကာမဂုဏျခံစားတာတို့မှာ သိနသေိနေ ဖွညျးဖွညျးခငျြး လုပျရတယျဆိုတာလေ “ “ ကွားဖူးတာ ကွားဖူးတာပဲ … တကယျလုပျတော့ စိတျမထိနျးနိုငျဘူးဗြ … လူလဲ တျောတျော ဟိုကျသှားတယျ “ ကြျောညှနျ့က ပွောရငျး မခငျမေ၏ ပါးပွငျကို တဈခကျြနမျးလိုကျကာ ပါးပွငျခငျြး ထပျလကျြ မှေးနလေိုကျသညျ။ မခငျမကေတော့ ဘာမှ မပွောတော့ပဲ သူမကိုယျပျေါ မှောကျပွီး အမောဖွနေသေူကို စိတျရှညျရှညျနှငျ့ ထပျမံလိုးရနျ နှိုးဆှပေးရနျ တှေးလိုကျမိသညျ။
ရှစိရှစိ ဖွဈနသေော စောကျပတျကွီးကွောငျ့ ကြျောညှနျ့ အီဆိမျ့သှားရသလို မခငျမမှောလညျး ဖငျကိုကပျပွီး လှညျ့မှပေေးနသေော လီးတံကွီးကွောငျ့ တဆတျဆတျ တုနျသှားရသညျ။ အတနျကွာမှ တရှူးရှူး တဟဲဟဲ အသံမြား ပြောကျသှားပွီး ကုတငျထကျတှငျ ထပျလကျြသား ငွိမျသကျသှားကွလတေော့သညျ။ သှကျလကျမွူးကွှစှာဖွငျ့ ထှကျပျေါနသေော ဒစ်စကို တေးသှား သီခငျြးတဈပုဒျ၏ အသံက အခနျးထဲတှငျ မတိုးမကယျြလေး ပွနျ့လှငျ့၍ နသေညျ။ ထိုတေးသှားကို မှီပွီး တဈကိုယျလုံး လှုပျရှားနသေော မိနျးကလေး တဈယောကျ၏ ဟနျက တေးသှားနှငျ့ လိုကျအောငျ မွူးကွှနသေညျ။ ပှဲကွညျ့ ပရိသတျ မရှိဘူးဟူသော အသိဖွငျ့ မိနျးကလေးက လှတျလပျရဲတငျးစှာပငျ တဈကိုယျလုံးကို အခကျြကကြ လှုပျရှားနလေသေညျ။ တေးသှားနှငျ့ အရေိုးဗဈ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနခွေငျးမို့ တေးသှားအလိုကျ ကိုယျကို သှကျလကျမွူးကွှစှာ ရှလြေ့ားပေးနရေသညျ။
စိတျလညျး ပြျောစရာ၊ ခန်ဓာကိုယျလညျး အဆီကငျး၊ အခြိုးအစားလညျး ပွပွေဈစသေော ကစားနညျးတဈခု ဖွဈခွငျးကွောငျ့ စိတျပါလကျပါစှာဖွငျ့ ဟနျနီ လကေ့ငျြ့နသေညျ။ ဤအခနျးတှငျ သူမတဈဦးတညျးသာ ရှိသညျဟူသော စိတျကွောငျ့ ရဲရဲပငျ ကားလိုကျ၊ ကှလိုကျ၊ မွှောကျလိုကျ၊ ခလြိုကျဖွငျ့ ခွထေောကျနှဈဖကျကို အခြိုးညီစှာ လှုပျရှားပေးနလေသေညျ။ ငယျရှယျနုပြိုသူမို့ အလှနျကွညျ့ကောငျးလှပသေညျ။ ကိုယျလုံးပျေါ မှနျကွီးကို ကွညျ့လိုကျ၊ တေးသှားအလိုကျ မှီအောငျ လှုပျရှားလိုကျဖွငျ့ တဈဦးတညျး အလုပျရှုပျလကျြရှိသညျ။
ထိုကဲ့သို့ လှတျလပျစှာ လှုပျရှားနမှေုကို စိတျဝငျတစား ငေးကွညျ့နသေူတဈဦးကိုတော့ ဟနျနီမသိ … သူမ အလုပျကိုသာ သှကျသှကျလကျလကျနှငျ့ လုပျနမေိသညျ။ အရေိုးဗဈလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနသေော ဟနျနီအား ကွညျ့ရှုနသေူတဈဦးကတော့ ကြျောညှနျ့ပငျ ဖွဈသညျ။ လူရှသေူ့ရှတှေ့ငျ မွငျခှငျ့ရရနျ မလှယျသော အခွအေနမြေားကို ကာယကံရှငျမြား ကှယျရာမှ ခြောငျးမွောငျး ကွညျ့ရှုရသောအခါ အားနာစရာ၊ မကျြနှာ ပူစရာမလိုဘဲ ရဲရဲတငျးတငျး ကွညျ့နိုငျသညျ။ ရခြေိုးခွငျး၊ လငျမယား အခဈြပလူးခွငျး၊ တဈဦးတညျး ကာမခံစားခွငျးနှငျ့ ယခု ဟနျနီလို အားကစား ဝတျစုံဖွငျ့ အရေိုးဗဈလကေ့ငျြ့ခနျးမြားမှာ ခြောငျးကွညျ့မှ အားရပါးရရှိသညျ။ ထိုအရသာမြားကို ကြျောညှနျ့ သိနပွေီမို့ မခငျမတေို့ လငျမယား ကာမဆကျဆံပုံကို လညျးကောငျး၊ မခငျမေ ရခြေိုးသညျကိုလညျးကောငျး၊ ဟနျနီ အရေိုးဗဈကစားသညျကို လညျးကောငျး ခြောငျးကွညျ့တတျနပွေီ ဖွဈသညျ။ ယခုလညျး ဟနျနီ၏ အားကစား လကေ့ငျြ့နမှေုကို အိမျအပွငျ အကာကွားမှ အနှောငျ့အယှကျ ကငျးကငျးနှငျ့ ငေးကွညျ့နမေိသညျ။ ယခုလို သူခြောငျးကွညျ့မှုကို ဘယျသူမှ မရိပျမိ၊ ဘယျသူမှ မသိသောကွောငျ့လညျး လှတျလပျလကျြရှိသညျ။
ကုနျးလိုကျ၊ ကှလိုကျ၊ ကားလိုကျ၊ ကော့လိုကျနှငျ့ ကော့ကော့ကံကား လှုပျရှားနသေော ဟနျနီ၏ ပွညျ့တငျးနသေညျ့ ကိုယျဟနျမှာ မကျြစိရှတှေ့ငျ အားရစရာ ကောငျးနသေညျ။ ကိုယျခန်ဓာ အခြိုးကသြူမို့ မကွီးလှနျး မသေးလှနျးသညျ့ ရငျသားမြားက ဆှယျတာအင်ျကြီအတှငျးဝယျ စိတျလှုပျရှားစရာ မွငျတှနေ့ရေသညျ။ ပွညျ့တငျးသော လကျမောငျးသားမြား၊ ခပျြရပျသော ဘိုကျသားနှငျ့ သေးကဉျြသော ခါးကလေးမြား အောကျဝယျ ပွနျ့ကားထှကျလာသညျ့ တငျပါးဆုံသားကွီးမှာ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ လိုကျအောငျ စှငျ့ကားလကျြ ရှိသညျ။ ဘောငျးဘီအတှငျးမှ ပေါငျတံကွီးနှဈခြောငျးကလညျး အရငျးတုတျခိုငျပွီး အဖြားဘကျသို့ တဈဖွောငျ့တညျး သှယျဆငျးသှားပုံမှာ ဆငျနှာမောငျးသဖှယျ အခြိုးအစား ကနြလှသညျ။
ဒူးခေါငျးလုံးလုံးလေးနှငျ့ ခွသေလုံး ခပျတဈတဈ ကလေးမြားကလညျး စိတျလှုပျရှားဖှယျပငျ။ အထူးသဖွငျ့ အသားကပျဘောငျးဘီ အောကျတှငျ သိသာရုံလေး ဖောငျးကွှနသေော ပေါငျရငျးဂှဆုံမှ အသားအုံကလေးမှာ ကြျောညှနျ့စိတျကို ဆူဝစေလေသေညျ။ အသားကပျ အကငြ်္ီ ဘောငျးဘီမြားအောကျရှိ အဖုအဖောငျးမြား၊ အခြိုငျ့အဝှမျးမြားက အနတေျောလောကျသာ ရှိသေးခွငျးမှာ ဟနျနီ့ကို ကြျောညှနျ့ ပိုစိတျဝငျစားစရာ ဖွဈနရေပသေညျ။ အသကျ ၁၉ နှဈလောကျနှငျ့ အရပျ ၅ပေ ၄လကျမလောကျ ရှိသော ကိုယျခန်ဓာတှငျ ရငျ ၃၃၊ ခါး ၂၃ နှငျ့ တငျ ၃၅ လောကျရှိနခွေငျးက ဟနျနီ၏ အလှကို မွငျသူ စှဲမကျစလေသေညျ။
ကျော်ညွန့်တွင် ယခုထက်ထိ ရည်းစားလည်း မရှိ၊ မိန်းမဆို ဝေလာဝေး။ ကားစီးသည့်အခါ ထိမိ ခိုက်မိတာလောက်ကလေးများသာ အတွေ့အကြုံ ရှိသည်။ ဘကြီးတော်သူ၏ ခြံတွင် လာရောက် နေထိုင်ပြီး သားသမီးကဲ့သို့ အတူ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူနေသော ရပ်ကွက်မှာ လူချမ်းသာများ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ရန် သင့်လျော်သော မြေကွက်ကျယ်၊ ခြံကွက်ကျယ်ကြီးများဖြင့် တသီးတသန့် ဖြစ်နေလေသည်။ ဘကြီးလုပ်သူမှာ မြန်မာဖြစ်သော်လည်း တရုတ်လူမျိုးများ သုံးသည့် ပစ္စည်းထုတ်သော လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ကိလေသာ ကာမပိုးများ ထကြွလာမှုကြောင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အချိုးကျသော မိန်းမများကို တွေ့လျှင် ရှေ့မှ၊ နောက်မှ၊ ဘေးမှ အစုံကြည့်ကာ စိတ်နှင့် ပြစ်မှားတတ်လာသည်။ ဗွီဒီယိုတွင် ကြည့်ရသည့် အမျိုးမျိုးသော လိုးနည်းများဖြင့် စိတ်ကူးလိုးနေမိသည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း တက္ကသိုလ်ပညာ တစ်ပိုင်းတစ်စ သင်ဖူးထားသူမို့ အိနြေ္ဒပျက်အောင် အငမ်းမရ ဖြစ်တာမျိုးတော့ မဖြစ်။
ရုပ်မပျက်ဘဲ စိတ်ကူးဖြင့် မှန်းပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ကာ အရသာ ယူတတ်သူသာဖြစ်သည်။ ကျော်ညွန့်မှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်သော ရုပ်ရည်ရှိပြီး ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် မြန်မာဆန်သူ လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဘကြီးလုပ်သူ၏ စီးပွားရေး ပြေလည်မှုကြောင့် မချို့မတဲ့ စားသောက်နေထိုင်ရသူ ဖြစ်ရာ သူတောင်းစား ထမင်းဝလျှင် လီးတောင်သည် ဆိုသည့်အတိုင်း အစားကောင်း အသောက်ကောင်းများကို မတောင့်မတ မကြောင့်မကျဘဲ စိတ်ထင်သလို စားသောက်နေနိုင်သူ ကျော်ညွန့်တွင် အမြဲတမ်းလိုလို ကာမစိတ်များ ထကြွနေတတ်သည်။ ကြည့်ထားသော ဗွီဒီယိုကားများကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြင်ရတွေ့ရသော ခပ်တောင့်တောင့် မိန်းမများကြောင့်လည်းကောင်း ခဏခဏ လီးတောင်တောင် နေလေ့ရှိရာ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ခန့် ကိုယ့်ဘာသာ ဂွင်းတိုက်ပြီး အာသာဖြေနေရသည် အထိ ဖြစ်နေလေသည်။ လီးတောင်လွယ်တတ်မှုကြောင့် အိမ်မှ အပြင်ထွက်တိုင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်ပြီး စိတ်ကို ထိန်းထိန်းထားရလေရာ ၎င်းအတွက် ကျော်ညွန့်တွင် အမြဲ စိတ်သောက ဖြစ်နေရသည်။
လူပျိုလူလွတ်မို့ ဖာချပြီး အာသာဖြေရန်တော့ ကျော်ညွန့် စိတ်မကူး။ ဟိုလူလိုး၊ ဒီလူလိုးနှင့် ကြုံရာလူ အလိုးခံရသော မိန်းမကို သူ မသတီပေ။ ထို့ကြောင့် မိန်းမ လိုးချင်စိတ် ပေါ်ပြီး လီးတောင်လာတိုင်း ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ် ဂွင်းတိုက်ပြီး အာသာဖြေလေ့ ရှိသည်။ ယခုလည်း နေ့လည်က ကြည့်ခဲ့သော အောကားထဲမှ စိတ်ထစရာ အကွက်များက ကျော်ညွန့်အား လီးမတောင် တောင်အောင် အားပေးသလို ဖြစ်နေလေသည်။ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ပြန်လာလာချင်း ဂွင်းတစ်ချီ တိုက်ခဲ့သော်လည်း အခု လီးထပ်တောင်နေပြန်ရာ ကျော်ညွန့်မှာ လီးတံကို လက်ဖြင့် အသာကိုင်ရင်း စိတ်ကူးနှင့် လိုးပွဲ ဖန်တီးနေမိသည်။ မြင်ရသူ ယောက်ျားများ ရမက်ထစရာ တောင့်တောင့်တင်းတင်း မိန်းမများကို ပြန်လှန် စိတ်ကူးဖြင့် မြင်ယောင်ရင်း သူ့တွင် မရှိသေးသော်လည်း ရအောင် ရှာကြံယူရန် စိတ်ကူး နေမိသည်။
မခင်မေမှာ ကျော်ညွန့်နှင့်လည်း ခင်မင်နေသည်။ တခြံနှင့်တခြံ တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ် ဝင်ထွက် သွားလာနေကြသည်အထိ ရင်းနှီးနေကြသည်။ ဦးသာဒင်မှာ ကျော်ညွန့် ဘကြီးနှင့် အလုပ် အတူတူ တွဲလုပ်ဖူးသူတစ်ဦး ဖြစ်သော်လည်း အနည်းငယ်တော့ အသက်ငယ်သည်။ ကျော်ညွန့် ဘကြီးတို့ လင်မယားမှာ အသက် ခြောက်ဆယ်နီးပါး ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ဦးသာဒင်နှင့် အတူ တွဲပြီး အလုပ် မလုပ်ကြဘဲ သီးသန့်သာ ကိုယ့်စီးပွားကိုယ် ရှာနေကြသူများ ဖြစ်သည်။
မခင်မေ၏ ရွှေဘိုမင်းကြိုက် တောင့်တင်း ဖြောင့်စင်းသော ခန္ဓာကိုယ်အား ဦးသာဒင်တစ်ယောက် အဆီအသား ဝါးနေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယောက်ျားနှင့် တည့်သောသူမို့ ကျသွားသည် မရှိဘဲ ပိုမို တောင့်တင်းနေလေရာ ကျော်ညွန့်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ဆုံခိုက် စကားစပ်မိကြလျှင် ….. “အဘိုးကြီးက တဏှာ ခပ်ကြီးကြီးပဲကွာ၊ မဖြိုနိုင်တာတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး၊ မခင်မေကိုက ပိုပြီး တောင့်လာတာ အဟီး …. ဒုသနသော ကြောက်လို့သာ၊ ရများရရင် ဖြုတ်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့အထဲမှာ မခင်မေပါတယ်ကွ“ ဟု တစ်ယောက်ကလည်း သူ့စိတ်ထဲ ရှိသည့်အတိုင်း ထုတ်ပြောသည်။
ကျော်ညွန့် ကိုယ်တိုင်လည်း အနီးအနားရှိ အပျိုအအိုများထဲတွင် မခင်မေလို ယောက်ျားများ စွဲမက်စရာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုး မရှိကြောင်း သိသည်။ စိတ်ကူးထဲတွင် လိုလားနေသော မိန်းမမှာ မခင်မေလို မိန်းမမျိုး ဖြစ်သည်။ “ကျော်ညွန့် ငါတော့ မင်းလိုသာ ခြံချင်း ကပ်နေရင် အဘိုးကြီးလာတိုင်း သွားသွား ချောင်းတယ်ကွာ …. မင်း မချောင်းဘူးလား“ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စကားကြောင့် နဂိုက စိတ်ကူး မပေါ်မိသော ကျော်ညွန့်မှာ ချောင်းချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ “အေးကွ …. မင်းဆို ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်လို့ ရနေတာ၊ ဘယ်နေရာက ချောင်းရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား ကျော်ညွန့်ရ“ ကျန်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ထပ်ပြောသဖြင့် ဦးသာဒင်တို့ခြံနှင့် အိမ်အနေအထားကို သိနေသော ကျော်ညွန့်အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ခုလို မြင်ယောင်လာမိသည်။
သူငယ်ချင်းများကို ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်လိုက်သော်လည်း စိတ်ကူးထဲတွင် ချောင်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ သည်နေ့ ဦးသာဒင် ရောက်နေကြောင်း ကျော်ညွန့် သိသည်။ စောစောကပင် ခြံထဲ၌ တွေ့ရသည်။ ယခုလောက်ဆိုလျှင်တော့ အိပ်ယာဝင်လောက်ပြီဟု အချိန်နှင့် အခြေအနေကို တွက်ဆရင်း တောင်နေသော လီးကို ခပ်ရွရွလေး ဆုပ်နေမိသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ည ၁၀ နာရီရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သံချောင်းခေါက်သံ ပေါ်လာလေရာ ဦးသာဒင်တို့အား ချောင်းရန် စိတ်ကူးရှိနေသော ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် ခါတိုင်းလို မိန်းမလိုးပွဲကို စိတ်ကူးနှင့် နွှဲကာ ဂွင်းတိုက်တတ်သည့် အကျင့်ကို အကောင်အထည် မဖော်သေးဘဲ ကုတင်ပေါ်မှ အသာ ထလိုက်သည်။ ခြံနှင့် အိမ်အနေအထား အားလုံး သိနေသူမို့ လက်တွေ့ချောင်းရန် အကောင်အထည် ဖော်နေသော ကျော်ညွန့်အတွက် ငါးမိနစ်ခန့် အကြာတွင် ဦးသာဒင်တို့ အိမ်ဘေးရှိ သူကြိုတင် ရှာဖွေထားသော အိမ်ထဲကြည့်၍ ရရန် အပေါက်ရှိသည့် နေရာကို ရောက်သွားလေပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ထပ်အိမ်မို့ ကျော်ညွန့် ကြည့်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေ နေလေသည်။
“ဟင့်အင်း …. ဟင့်အင်း“ အသေအချာ မြင်နိုင်သော နေရာမို့ အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် ဦးသာဒင်တို့ လင်မယား၏ အနေအထားနှင့် အခြေအနေကို သဲကွဲစွာပင် ကျော်ညွန့် မြင်နေရပေပြီ။ ဗွီဒီယိုတွင် မြင်ဖူးထားသော်လည်း ယခုလို သူကိုယ်တိုင် အချစ်ပွဲနွှဲမည့် မြင်ကွင်းကို တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသူမို့ ကျော်ညွန့် ရင်တွေ ခုန်နေလေသည်။ “ကွယ် …. သဲလေးကလည်းကွာ …. အစ်ကိုကြီး မဖြစ်လို့ လုပ်မပေးတာပါ၊ ကဲပါ …. ဒီဘက် လှည့်စမ်းပါအုံး“ “ဟင့်အင်း …. ဟင့်အင်း“ တစ်ခုခု ပူဆာသည်ကို မရ၍ သပိတ်မှောက်နေဟန်ဖြင့် ကုတင်စွန်းနားထ တိုးကာ ဦးသာဒင်အား ကျောပေးပြီး တဟင့်ဟင့် လုပ်နေသော မခင်မေ၏ နောက်မှ ကပ်ကာ ဖက်ထားသော ဦးသာဒင်၏ ချော့နေဟန်ကို ကျော်ညွန့် အတိုင်းသား မြင်နေ ကြားနေရပြီ ဖြစ်သည်။
နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ထိကပ်နေရာမှ ခွာလိုက်သည်တွင် ပြွတ်ကနဲ အသံ ပေါ်လာသလို တစ်ဦး၏ ပါးစပ်ထဲ တစ်ဦး၏ လျှာကို ထည့်ပြီး ကလိနေကြပုံကလည်း ဗွီဒီယို၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကျော်ညွန့်အတွက် စိတ်ကျေနပ်သွားရသည်။ “အင်း …. အဘိုးကြီးတွေကလဲ ခေတ်မီသားပဲ“ ဟု ချီးကျူးလိုက်မိသည်။ လျှာခြင်း ကလိနေကြသလို ဦးသာဒင်၏လက်က မခင်မေ၏ နို့အုံကြီးများကို ညဝတ် အင်္ကျီပေါ်မှ ဆုပ်ကိုင်ညှစ်ပေးနေပြန်သည်။ ဦးသာဒင်၏ လက်သည် မခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးပေါ်တွင် အထက်အောက် တော်တော် နှံ့အောင် လျှောက်ပြီး ပွတ်သပ်နေပုံကိုလည်းကောင်း၊ မခင်မေ၏ လက်က ဦးသာဒင်၏ ပေါင်ကြားထဲနှိုက်ပြီး လီးကလို ဖမ်းဆုပ်နေပုံကို လည်းကောင်း စိတ်တက်ကြွစရာ ကျော်ညွန့် မြင်နေရသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အတင်းဖက်ပြီး ပွတ်သပ် နှိုးဆွနေရာမှ ဦးသာဒင်က ခွာလိုက်ကာ သူ့ကိုယ်ရှိ အဝတ်အစားများ ဖယ်နေသလို မခင်မေကလည်း ဝတ်ထားသော ညဝတ် အင်္ကျီကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ ထိုအခါ ကျော်ညွန့်၏ မျက်လုံးများ ပိုမို ပြူးကျယ်သွားရသလို အသက်ရှူသံများ ပြင်းလာပြီး ရင်လည်း ပိုခုန်သွားရသည်။ မခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးကို စိတ်ကူးနှင့် အဝတ်အစား ချွတ်ပြီး ကြည့်ဖူးသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တုံးလုံး မမြင်ဖူးသေးသူ ကျော်ညွန့် တစ်ယောက် အသက်ရှူ မြန်လည်း မြန်စရာပင်။
ဖြူဖွေးဝင်းဝါနေသော အသားက မီးရောင်အောက်တွင် ဝင်းပနေသည်။ တောင့်တင်း ဖုထစ် ထွားအစ်နေသော အသားဆိုင်များက အားရစရာပင်။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် သူ့နေရာသူ အဆင်ပြေစွာ နေရာယူထားကြသည်မှာ ကျော်ညွန့်၏ ရင်များအား ပူစေလေသည်။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းနှင့် မြင်ရသူ ယောက်ျားများ စိတ်ထချင်စရာ ကောင်းသော မခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးကြီးအား အငမ်းမရပင် ကျော်ညွန့် ကြည့်နေမိသည်။ ဖြူဖွေးသော အသားအရေနှင့် လိုက်အောင် ကိုယ်လုံးမှာ ပြည့်တင်းလှသည်။ လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမမို့ ထွားအယ်နေသော ကိုယ်လုံးပေါ်တွင် မို့အိအယ်ကားလှသည့် နို့အုံကြီး နှစ်လုံးကလည်း ကိုယ်အထက်ပိုင်းတွင် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ပြန့်ပြူးသော ဝမ်းပြင်၊ ချက် ခွက်ခွက်လေးနှင့် ဆီးခုံ ပြန့်ကားကား အထက်ရှိ မဲနက်နေသော အမွှေးများက ပြည့်တင်းကာ ဖြောင့်စင်းနေသော ပေါင်တံကြီး နှစ်ချောင်းအရင်း ဆက်ရာ အပေါ်ကြားတွင် ထင်ထင်ရှားရှား …. ကိုယ်လုံးကို အငြိမ်မနေဘဲ ဟိုဘက် ဒီဘက် လှုပ်ရှားပြီး ပေါင်တံကြီးများအား ပူးကပ်ထားကြသဖြင့် ပေါင်ခွကြားတွင် ညပ်နေသော စောက်ဖုတ်အုံကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရ၍ ကျော်ညွန့်မှာ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေသည်။
စောက်ဖုတ်ကို မမြင်ရသော်လည်း အလုံးလိုက် အချောင်းလိုက်နှင့် ကြီးထွား ထည်ဝါနေသော ပေါင်တံ ဖြိုးဖြိုးကြီးများ၊ ပြည့်ဖူးသော ဒူးခေါင်း၊ တင်းရင်းနေသော ခြေသလုံးများနှင့် အချိုးအစားကျလှသည့် ကိုယ်လုံး အဆက်အပေါက်ကြီးက ကျော်ညွန့်အား တံတွေး သီးနေစေလေသည်။ မခင်မေ၏ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေသော ကိုယ်လုံးကြီးမှာ တကယ်ပင် အားရစရာ …. စိတ်ထချင်စရာ …. လိုးချင်စိတ်များ ချိုးနှိမ်၍ မရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်နေပေသည်။ ထိပ်ပြောင်ပြောင် ဘိုက်ရွှဲရွှဲနှင့် ဦးသာဒင်၏ ကိုယ်လုံးမှာလည်း အဝတ်အစားမဲ့နေပြီ ဖြစ်ရာ သူလည်း အလုံးအထည် မသေးလှပေ။ သို့သော် ပေါင်ကြားထဲရှိ လီးတံမှာ ထဟန် မတူသေးမှုကြောင့် ကျော်ညွန့်မှာ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေမိသည်။ ပျော့ခွေနေဟန်ရှိသော လီးတန်ကြီး၏ အရှည်နှင့် လုံးပတ်မှာ ခြောက်လက်မ သာသာလောက်နှင့် ကျပ်လုံးသာသာလောက် ရှိမည်ဟု တွေးနေမိသည်။ “ကွယ် …. အစ်ကိုကြီးရယ်“ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားကြသည်နှင့် ခုံးထမောက်ဖြိုးနေသော နို့အုံကြီး နှစ်လုံးအား တစ်လုံးကို လက်ဝါးထဲထည့်ကာ ဆုပ်ချေပွတ်သပ်ရင်း ကျန်တစ်လုံးကို ပါးစပ်နှင့် ကုန်းစုပ်နေသော ဦးသာဒင်ကြောင့် မခင်မေ၏ နှုတ်ဖျားမှ ခပ်တိုးတိုး ညည်းသံလေး ပေါ်ထွက်လာရသည်။
“အား … လား … လား … အိုး ….. အစ်ကိုကြီး“ ဆတ်ကနဲ တွန့်သွားသော မခင်မေနှင့်အတူ ကျော်ညွန့်၏ ကိုယ်လုံးကြီးမှာလည်း အိမ်နံရံနှင့် ပိုမို ကပ်သွားရသည်။ ဗွီဒီယိုထဲတွင် ထိုကဲ့သို့ နှိုးဆွမှုကို မြင်ဖူးပြီဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ လုပ်ရဲဟန် မတူဟုသာ ထင်နေသော ကျော်ညွန့်အတွက် ဦးသာဒင်၏ အပြုအမူမှာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်သွားရသည်။ စိမ်ပြေနပြေပင် ခုံးမောက်ကြွတက်နေသော စောက်ပတ်ပြင်ကြီးအား လျှာဖြင့် ပင့်ပင့် ရက်နေပုံမှာ အားပါးပါး …. အားရစရာပင်။ ရက်အားပါသလောက် မခင်မေမှာလည်း ထိထိရောက်ရောက် ခံစားနေရဟန် တူသည်။ မကြာမီ မခင်မေ၏ စောက်ပတ်ကို ရက်ပေးနေသူ ဦးသာဒင်၏ ကိုယ်လုံးကြီး မွေ့ယာပေါ်တွင် ပက်လက်ဖြစ်သွားသည်။
ထိုအခါ မခင်မေက ထပြီး ပေါင်ခြံထဲတွင် ပျော့ခွေနေသလို ဖြစ်နေသော လီးတံ ရှည်ရှည်ကြီးအား ပါးစပ်နှင့် အသာငုံပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည့်အတွက် အမြင်အာရုံသာ ရှိနေသော်လည်း ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင် ခံစားလိုက်ရဟန်ဖြင့် ကိုယ်လုံးတွန့်သွားရသည်။ ဦးသာဒင်တို့ လင်မယားသည် ခေတ်မီသူများ ဖြစ်ကြောင်း ကျော်ညွန့် မျက်မြင် သိသွားလေပြီ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကာမစိတ်များ နှိုးဆွပေးသည်မှာ မြန်မာ့ဓလေ့ထက် လွန်ကဲပြီး အနောက်တိုင်း အယူအဆများဖြင့် မရွံမရှာပင် လုပ်ကိုင်ပေးနေကြသည်။ တစ်ဦးပြီးမှ တစ်ဦးက ပြန်လုပ်ပေးခြင်းမှ ပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်သော မခင်မေပေါ် ပြောင်းပြန်မှောက်ကာ လီးအစုပ်ခံရင်း စောက်ပတ်ကို အားပါးတရ ရက်ပေးနေပုံက မြန်မာလင်မယားမှ ဟုတ်ပါလေစဟု ကျော်ညွန့် တွေးနေမိသည်။ ဦးသာဒင်တို့ လင်မယား၏ ကာမဂုဏ် ခံစားမှုမှာ လွန်လွန်ကဲကဲ ဖြစ်နေကြလေရာ ကျော်ညွန့်မှာ ဦးသာဒင်အစား အစုပ်ခံချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်မိသည်။
ဦးသာဒင်လိုးသမျှ စိတ်တူကိုယ်တူ ပြန်လည်ပြီး လှုပ်ရှားနေသော မခင်မေ၏ ရမက်ထန်ပုံကို လည်းကောင်း၊ အသက်ကြီးနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိန်းမ တစ်ယောက်အား လူငယ်များထက်ပင် အပင်ပန်းခံကာ လိုးနိုင်ပြီး အလိုးကျွမ်းကျင်လှသော ခပ်ကြာကြာ အမျိုးမျိုး လိုးနိုင်သော ဦးသာဒင်၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို လည်းကောင်း ကျော်ညွန့် အသိအမှတ် ပြုမိသည်။ သို့သော် တစ်ခု အားမရသည်ကတော့ လီးတံရှည်ရှည် အလုံးကြီးကြီး၏ ပျော့ခွေနေမှုကိုတော့ ကျော်ညွန့် သဘောမကျမိ။ သူ့လီးလိုပင် သံချောင်းတစ်ချောင်းလို မာကျောနေသည့် အနေအထားမျိုးဖြင့် တွေ့မြင်ချင်မိသည်။ သို့သော် အစားကောင်းကောင်းများနှင့် အားဆေးအမျိုးမျိုးသုံးပြီး မယားကြီး တစ်လှည့်၊ မယားငယ် တစ်လှည့် မပြတ်တမ်း လိုးနေနိုင်သော ဦးသာဒင်ကို ကျော်ညွန့် အထင်ကြီးမိသည်။ သူဆို ဒီလောက်လိုးနိုင်စွမ်းမရှိနိုင်ချေ။
သူများ လင်မယားလိုးတာ ချောင်းကြည့်ရင်း ကျော်ညွန့် သုတ်နှစ်ခါထွက်ပြီးသည် အထိ ဖြစ်သွားရသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလိုးပုံကို ကြည့်ရင်း လိုးကာစမှာ တစ်ခါ သုတ်ထွက်သွားရပြီး ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း လီးထပ်တောင်လာမှုကြောင့် နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီး သုတ်ထွက်သည်အထိ ဂွင်းတိုက်မိလိုက်သည်ကိုတော့ ကျော်ညွန့် မေ့တော့မည် မဟုတ်ပေ။ အားပါးတရ လိုးပွဲ နွှဲပြီးသွားသော ဦးသာဒင်တို့ လင်မယား၏ တယုတယ လုပ်နေကြပုံနှင့် အနားယူသည်အထိ ကြည့်ပြီးနောက် ကျေနပ်စွာ ကြည့်ခဲ့ရသော လိုးပွဲကို ကျောခိုင်းသွားချိန်မတော့ ကျော်ညွန့် ဒူးခေါင်းများ ချောင်သလိုဖြစ်ကာ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး နုံးသွားရခြင်းကလည်း ကျော်ညွန့်အတွက် ထင်ရှားနေမည့် အတွေ့အကြုံပင် ဖြစ်ပေတော့မည်။ တဗွမ်းဗွမ်းနှင့် ရေလောင်းချိုးလိုက် ဆပ်ပြာတိုက်လိုက် ချေးတွန်းလိုက်နှင့် မခင်မေ အလုပ်ရှုပ်နေသလို ကျော်ညွန့်မှာလည်း ကုန်းလိုက် ကွလိုက် ဟိုဒီလှည့်လိုက်နှင့် ကိုယ်ဟန် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသော မခင်မေအား ကြည့်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေပေသည်။
မိန်းမ မလိုးရဘဲ ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ် ဂွင်းတိုက်ပြီး သုတ် ထုတ်နေရမှုကို ရပ်ကာ တကယ့် မိန်းမ တစ်ဦးအား ခပ်ရဲရဲ ပူးကပ် ကြံစည်လျှင် သူကြုံချင်နေသည့် အလိုး အတွေ့အကြုံကို ရလိမ့်မည်ဟု တွေးရင်းက မခင်မေလို ခပ်ထထ မိန်းမ တစ်ဦးမှာ လင်နှင့် တစ်ပတ်လောက် ကင်းကွာနေမှုကြောင့် ကာမ အရသာကို တောင့်တနေလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်း တွေးနေမိသည်။ အခြေအနေကို ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ဆွဲပြီး ခပ်ရဲရဲ တွေးရင်း ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသော ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် သူ့အိပ်ယာဘေး စားပွဲပေါ်၌ ၈-လက်မ အသွားရှိသော ဓားမြှောင်တစ်ချောင်းကို တွေ့လိုက်ရာမှ စိတ်ကူးတစ်ခု သူ့ခေါင်းထဲတွင် ထင်းကနဲ ဖြစ်ပေါ်သွားရသည်။ ထိုဓားမြှောင်ကို ယူပြီး အိမ်ပေါ်က ခပ်သုတ်သုတ် ဆင်းခဲ့လေတော့သည်။ “ဒေါက် … ဒေါက်“ “ဘယ်သူလဲ“ “ကျွန်တော်ပါ …. မခင်မေနဲ့ ခဏလောက် စကားပြောချင်လို့“ စိတ်ကူးတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရဲစိတ်အားကိုးပြီး ထွက်လာသော ကျော်ညွန့်က မခင်မေတို့ အိမ်တံခါးကို အသာခေါက်ရင်း ပြန်ပြောလိုက်သည်။
ကျွီကနဲ မြည်သွားပြီး ပိတ်ထားသော တံခါး ပွင့်သွားသည်။ “လာလေ ကျော်ညွန့် ….. ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘာများ ပြောစရာ ရှိနေလို့လဲ …. ကဲ ဝင်တော့လေ“ သူ့အား တံခါး ဖွင့်ပေးရင်း အနီးကပ် ပြောဆိုနေသော မခင်မေကို မြင်နေရသော ကျော်ညွန့်၏ တစ်ကိုယ်လုံး ရာဂသွေးများ ဖြုန်းကနဲ ဆူဝေတက်သွားရသည်။ ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းစလေးသာ ရှိသော မခင်မေ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ရင်လျားထားသော ထဘီ တစ်ထည်မှလွဲပြီး ဘာမှ ရှိမနေပေ။ ထို့ကြောင့် ဝင်းဝါပြည့်တင်းသော အသားများနှင့် စည်းနှောင်ဖုံးလွှမ်းထားသော လုံချည်အောက်မှ ထင်ရှားနေကြသည့် အသားဆိုင်များကို မြင်နေရသည်။ ထို့အပြင် မခြောက်တခြောက်ကလေး ဖြစ်နေသော လိမ်းပြီးစ သနပ်ခါးနံ့လေးများက ကျော်ညွန့် နှာခေါင်းထဲသို့ ခပ်မွှေးမွှေး တိုးဝင်နေပြီး ဖြစ်ရာ စောစောက ပြန်ပျော့သွားသော လိင်တံကြီးမှာ သိသိသာသာပင် ပုဆိုးအတွင်းဝယ် ထောင်ထလာလေတော့သည်။
မုန်ယိုနေပြီဖြစ်သော ရာဂစိတ်ကို ထိန်းရင်း အိမ်ထဲဝင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တံခါး ပြန်ပိတ်လိုက်သည့် မခင်မေ၏ နောက်မှနေကာ မခင်မေ၏ နောက်ပိုင်းအလှအား ခပ်ရဲရဲ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ တဟုန်ထိုး ကြွနေသော ရမ္မက်စိတ်များ ကျော်ညွန့်တွင် ပိုမို ဖြစ်ပေါ်နေလေပြီ။ “ဟဲ့ …. အို နင် ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကို ဒီလောက် ကြည့်နေရတာလဲ“ ရုတ်တရက် နောက်ပြန်လှည့်လိုက်သော မခင်မေမှာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကြီးအား အငမ်းမရ စူးစိုက်ကြည့်နေသော ကျော်ညွန့်ကြောင့် လန့်သွားရသည်။ ထို့အပြင် ပုဆိုးအတွင်းမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသာ အရာမှာ သိသာ ထင်ရှားနေလေရာ ထိုအရာ ဘာမှန်း သိနေသူ မခင်မေအတွက် အံ့သြ ထိတ်လန့်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်သွားရသည်။ “ကျ …. ကျနော် မနေနိုင်တော့ဘူး မခင်မေ …. မခင်မေကို ချစ်ချင်လို့“ သေမထူး နေမထူးဟု ဆုံးဖြတ်ထားသော သူတို့ ပုံစံအတိုင်း စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချခဲ့ပြီ ဖြစ်သော ကျော်ညွန့်က သူယူလာသော ဓားမြှောင်ကို ခါးနောက်မှ အသာဆွဲယူလိုက်ရင်း ပြောလိုက်သည်။
ချက်ကလေးကို လျှာဖြင့် ထိုးကလိနေရာမှ ဆီးခုံပေါ် မျက်နှာရောက်လာကာ မထူမပါးလေး ပေါက်နေသော စောက်မွှေးများကို အသာကျော်ပြီး အမြှောင်းလိုက် ခုံးထဖောင်းကြွနေသော စောက်ပတ်အုံကြီးကို အနီးကပ် ကြည့်လိုက်သည်။ မိန်းမစောက်ပတ်အား ဗွီဒီယိုထဲနှင့် မခင်မေအား ချောင်းကြည့်ဖူး၍ အဝေးမှသာ မြင်ဖူး နေသူ ကျော်ညွန့်မှာ ကြီးမား ဖြောင့်တန်းလှသော ပေါင်တံဖြူဖြူကြီး နှစ်ချောင်းအရင်းတွင် ကပ်လျက် ထင်ထင်ရှားရှား ခုံးထနေသော လက်ဝါးတစ်အုပ်စာမျှ ရှိသည့် မခင်မေ၏ စောက်ပတ်ကြီးအား ရင်တုန်ပန်းတုန်နှင့်ပင် အသေအချာ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ စောစောက ရေချိုးထားသော်လည်း တစ်ခါမှ မတို့မထိဖူး၍ ဗြုန်းကနဲ တို့ထိရမှာ ကျော်ညွန့် ရွံ့နေမိသည်။ သို့သော်လည်း မခင်မေ၏ စောက်ပတ်အုံကြီးမှာ စောက်မွှေးများ မရှိဘဲ ဆီးခုံတွင်သာ အမွှေးရှိခြင်းကြောင့် အနီးကပ် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နေရလေရာ ပြဲအာနေသော အကွဲကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊
အကွဲကြောင်းဘေးရှိ လက်နှစ်လုံးသာသာခန့် ခုံးထပြီး အမြှောင်းဖြစ်နေသော စောက်ပတ်နှစ်ခမ်းသား နှစ်ခုကိုလည်းကောင်း၊ အကွဲကြောင်းပေါ်ရှိ ခပ်မို့မို့ဆီးခုံပြင်ကိုလည်းကောင်း၊ နောက်ဘက်သို့ ကျကျသွားသဖြင့် ဖင်နှင့် ပေါင်တံကြီး နှစ်ခုကြားတွင် အသားတုံးကလေး နှစ်ခု ကပ်ထားသလိုဖြစ်နေလေသည်။ ကျော်ညွန့်သည် မခင်မေ၏ တင်ပါးအုံကြီး နှစ်လုံးအောက်ကို သူ့လက်ထိုးသွင်းလိုက်ကာ ဆုပ်နယ် ပွတ်သပ်ပေးရင်း စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးအား ကြည့်နေရာမှ ဗွီဒီယိုထဲနှင့် ဦးသာဒင် လုပ်သလို လျှာဖြင့်ယက်ပေးရ ကောင်းမလားဟု စဉ်းစားလိုက်မိသည်။ မလုပ်ဖူးသေးသဖြင့် ရွံသလိုလည်း ဖြစ်နေသည်။
“အား … အိုး … ကျော်ညွန့် …. အိုး … အား အား“ ကျော်ညွန့်၏ စောက်ပတ်ယက်ပေးမှုက အလွန် ထိရောက်ပြင်းထန်လှပေရာ အယက်ခံနေရသူ မခင်မေ၏ နှုတ်ဖျားမှ ညည်းသံစုံ ထွက်ပေါ်နေပြီး ပေါင်တံ ဖြိုးဖြိုးကြီးများကို လှုပ်ယမ်းလိုက်၊ ဖင်ဆုံအိအိကြီးများကို ပင့်လိုက်၊ ခါးနွဲ့နွဲ့လေး ဖယ်ယမ်းလိုက်နှင့် အရူးအမူးဖြစ်နေလေသည်။ စောက်ပတ်အုံကြီးကို အထက်အောက် ပင့်ယက်လိုက်၊ အကွဲကြောင်းထဲ လျှာထိုးသွင်း ကလိလိုက်၊ စောက်စေ့ချွန်ချွန် မာတာတာလေးကို နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိပြီး ပွတ်ချေလိုက် လုပ်ရင်း ကျော်ညွန့်က သူ့လက်ကို မခင်မေ၏ ပေါင်တံလုံးလုံးကြီးများအား ပွတ်သပ်ပေးမိသည်။ တင်ပါး ဆူထွားထွားကြီးများမှာလည်း မလွတ်၊ ထိုမှ အပေါ်ဘက်တွင် ရှိသော နို့အုံ အိအိကြီးများကို လှမ်းပြီး မမိတမိကိုင်ကာ နို့သီးကလေးများအား လက်ညှိုးနှင့် လက်မကြား ညှပ်ပြီး ပွတ်ချေပေးနေပြန်ရာ မခင်မေ တစ်ယောက် မွေ့ရာပေါ်ဝယ် တလူးလူး တလွန့်လွန့်၊ တအီးအီး တအင့်အင့်နှင့် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေလေသည်။ တော်တော်လေးကြာအောင် ယက်ပေးနေသောကြောင့် စောက်ပတ်အတွင်းမှ စိုရွှဲကျလာသော ချွဲပြစ်သည့်ရေများကို ကျော်ညွန့် သတိပြုမိသည်။
တဏှာပိုးများ ထကြွနေမှုကြောင့် မရွံမရှာယက်ပြီး မျိုချမိသည်အထိ ဖြစ်သွားရသည်။ စောက်ပတ်အုံကြီးအား ယက်နေရာမှ ပေါင်တံဖြိုးဖြိုးကြီးပေါ် ပါးစပ်တင်ကာ တရစပ် ယက်ပေးရင်း ဒူးခေါင်းနားရှိ ထမီအား လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်အောင် ဆွဲချွတ်လိုက်လေတော့သည်။ ယခုအခါ မခင်မေ၏ တစ်ကိုယ်လုံး မည်သည့်အဝတ်အစားမှ ဖုံးကွယ်မထားတော့ဘဲ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားရလေပြီ။ ဘာမှ မရှိတော့သော မခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးကြီးအား ဒူးထောက်ကာ အပေါ်မှဆီးကြည့်နေရင်းမှ ကျော်ညွန့်သည် သူ့ခါးတွင်ရှိသော ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ပုဆိုးချွတ်ပြီး အပေါ်ပိုင်းရှိ စွတ်ကျယ်ပါ ချွတ်လိုက်သောအခါ နှစ်ဦးစလုံး ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်နေကြလေတော့သည်။
ပေါင်ကြားတည့်တည့်ကို လီးထောက်ပြီး နို့အုံပေါ်တွင် လက်တင်ကာ မျက်နှာပေါ် အပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်၍ ကျော်ညွန့်မှာ ကုန်းကုန်းကွကွကြီး ဖြစ်နေလေသည်။ နေရာပြင်နေသော ကျော်ညွန့်အား မခင်မေကလည်း ဝိုင်းကူလုပ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ စောက်ပတ်အုံပေါ် ဖိထောက်နေသော လီးတံကြီးအား လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အဝကို အသာတေ့ပေးလိုက်ရာ အပေါ်မှဖိပြီး လှုပ်ရှားရန်ပြင်နေသော ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ပိုများလာပြီး လီးတံကြီးအား ဖိချလိုက်လေတော့သည်။ အိကနဲ တိုးဝင်သွားသော လီးတံကြီးကြောင့် သူမ၏ လက်ကို မခင်မေက လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ညွန့်မှာတော့ ယခုမှ ပထမဆုံး မိန်းမစောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်ရခြင်းဖြစ်ရာ ဝင်မှန်းသိသည်နှင့် အားစိုက်ပြီး ဖိထိုးသွင်းနေမိသည်။ လီးတံမှာ မခင်မေ၏ စောက်ပတ်အုံထဲသို့ တဝက်လောက်သာ ဝင်နေသော်လည်း ကျော်ညွန့်အတွက်မူ အနေခက်သလို ဖြစ်နေလေသည်။
စောက်ပတ်ထဲ တစ်ခါမှ မဝင်ဖူးသေးသော လီးတံကြီးမှာ ပူပူနွေးနွေး အိအိစက်စက်နှင့် အသားနုများက တစ်ဆို့ဆို့ လုပ်ပေးနေမှုကြောင့် ထူးခြားသလို ဖြစ်နေရသည်။ ဦးသာဒင်က ခဏခဏ လိုးထားသော မခင်မေစောက်ပတ်ကြီးမှာ သူအတင်းထိုးသွင်းတာကို အဆုံးထိမဝင်ဘဲ ခပ်ကြပ်ကြပ်နှင့် ဖြစ်နေလေရာ ကျော်ညွန့်မှာ အံ့အားသင့်နေမိသည်။ ထပ်ပြီး ကျော်ညွန့် သတိပြုမိသွားသည်ကတော့ သူ့လီးတံကြီး အဆုံးထိလည်း သွင်း၍ မရသေး၊ အပေါ်မှဖိပြီး ဆောင့်သွင်းရချက်ကလည်း လေးငါးချက်မျှသာ ရှိသေးချိန်တွင် သုတ်ထွက်ချင်သလို ဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မခင်မေ၏ ချိုင်းကြားမှ လက်ကို သွင်းပြီး မျက်နှာချင်းထပ်ကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးရမှု မကြာသေးဘဲ ပြီးချင်သလို ဖြစ်နေခြင်းအတွက် ကျော်ညွန့် မကျေနပ်၊ သို့သော် သူ ဘာမှလည်း မလုပ်တတ်။ ထို့ကြောင့် သူ့အား အောက်မှ ခပ်တင်းတင်း ပြန်ဖက်ထားရင်း ပင့်ကော့ပေးနေသော မခင်မေကို ပါးခြင်းအပ်ဖိထားလိုက်ရာမှ တင်ပါးကိုမြှောက်ပြီး ဆက်ဆောင့်လိုက်မိသည်။ “ အား … အား … အား … “ မခင်မေ၏ ညည်းသံမဟုတ်၊ သုတ်များ ပန်းထွက်သွားပြီဖြစ်သော ကျော်ညွန့်၏ ညည်းသံသာ ဖြစ်သည်။ လီးသွင်းပြီး ဆယ်ချက်ခန့်သာ ဆောင့်ရသေးသည် သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်သွားပြီမို့ ကျော်ညွန့်မှာ သူ့ကိုယ်သူ အံ့လည်း အံ့သြ၊ မကျေလည်း မကျေနပ်ဖြစ်သွားရသည်။ သူကြည့်ဖူးသော ဗွီဒီယိုထဲတွင် ပုံစံလေးငါးမျိုး ပြောင်းပြီး အားရပါးရလိုးပြီးမှ သုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ဆောင့်ချက်များကို တစ်ခါတစ်ခါ သူရေတွက်ကြည့်ရာ အချက် ၁၀၀ ကျော် ၂၀၀ လောက်မှ ပြီးတတ်ကြပုံနှင့် တချို့သရုပ်ဆောင်များဆိုလျှင် စောက်ပတ်ကိုလိုးနေရာမှ လီးတံကိုထုတ်ပြီး မိန်းမ သရုပ်ဆောင် ပါးစပ်ထဲဆက်သွားကာ အစုပ်ခံကြတာတောင် ချက်ချင်းသုတ်မထွက် အတော်ကလေး ကြာမှ ထွက်သွားကြသည်။
စောက်ပတ်ကို လိုးသည်မှာလည်း တစ်ဆုံးဝင်အောင် လိုးတတ်ကြရာ ကြည့်သူတိုင်း မရိုးမရွဖြစ်သော်လည်း အားတော့ရကြသည်။ မလိုးမီ လီးအစုပ်ခံ၊ ဂွင်းအတိုက်ခံ အချက် ၁၀၀ ကျော် ၂၀၀ ဆောင့်လိုးပြီး ချက်ချင်း သုတ်မထွက်မှုကို မြင်ဖူးသော ကျော်ညွန့်မှာ ယခုသူ့တွင် ဘာချွတ်ယွင်း၍ သုတ်ထွက် မြန်ရကြောင်း ကျော်ညွန့် မသိ။ လောလောဆယ် ကျော်ညွန့် သိသည်ကတော့ ဆယ်ချက်လောက် ဆောင့်ပြီး လီးတစ်ဝက် တစ်ပျက်ဖြင့် တစ်ချီပြီးသွားရခြင်းကို အားမရဘဲ လီးတံကျဉ်နေသည့်ကြားက ဆက်ဆောင့်နေမိတော့သည်။ လူပျိုကလေးမို့ သုတ်ထွက်မြန်မှုကို မခင်မေသိသော်လည်း ခနလေးပြီးသွားပုံကိုတော့ မကြိုက်၊ သို့သော် သုတ်ထွက်ပြီးတာတောင် မနားဘဲ ဆက်ဆောင့်လိုးနေသည့် ကျော်ညွန့်အား မီရာကို ပြန်ဖက်ရင်း အောက်မှ ပင့်ပင့်ပေးမှုတော့ မခင်မေ လုပ်ပေးမိသည်။
မခင်မေ၏ ကိုယ်နံ့နှင့် နူးနူးညံ့ညံ့ အိအိစက်စက် အတွေ့ထူးလှသော အသားဆိုင်များက အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူ ကျော်ညွန့်အတွက် စိတ်ရောလူပါ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရအောင် ဖြစ်နေရပါသည်။ ထွေးအိသော ကိုယ်လုံးကြီးအား အတင်းဖက်ထားရင်း သူထွက်သွားသော သုတ်ရည်များဖြင့် ချောကျိနေသော စောက်ပတ်အုံထဲသို့ အတင်းဆောင့်ပြီး ဆီးခုံချင်း ကပ်သည်အထိ လီးတံကြီး အကုန်သွင်း၍ ရမှုတော့ ကျော်ညွန့် ကျေနပ်မိသည်။
စောက်ပတ်အတွင်းမှ ထူးခြားသော အတွေ့အထိက အရိုင်းသက်သက်သာ ရှိသော ကျော်ညွန့်အား စိတ်လှုပ်ရှားလာစေသည်။ ပထမတစ်ခါ ထွက်ပြီးသည်မှာ သိပ်မကြာသေးသော်လည်း ဆက်ဆောင့်ချက် ၁၀၀ သာသာတွင် မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ဒုတိယမြောက် သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားလေတော့သည်။ “ အား … အား …အား “ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်လျက်ပင် ခပ်ပြင်းပြင်းဖိဆောင့်ရင်း တအီးအီးနှင့် ဖြစ်သွားသည်အထိ ဆက်ဆောင့်ပြီးနောက်တော့ ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် မခင်မေကိုယ်ပေါ်တွင် ပျော့ခွေသွားလေတော့သည်။ လီးတံကြီးမှာလည်း သုတ်နှစ်ခါ ဆက်တိုက်နီးပါး ထွက်သွားရသဖြင့် ကျဉ်ပြီး ကျိန်းသွားရသည်။ ပြီးတော့ ထင်ထားသလို အီဆိမ့်သွားမှုက ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် မဖြစ်ဘဲ လူသာနုံးသွားရမှုကြောင့် ဘာမှ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေမိသည်။ မခင်မေ ကိုယ်ပေါ်တွင်ပင် ဆက်ဖိထားရင်းက စောက်ပတ်ထဲမှ လီးမထုတ်ဘဲ မှိန်းနေရင်း စဉ်းစားနေမိသည့် ကျော်ညွန့်အား မခင်မေတစ်ယောက် အတော် သည်းခံနေရသည်။ သူ့မှာ ခံကောင်းတုန်းသာ ရှိသေးသည်။ အတွေ့အကြုံရင်နေသူမို့ တစ်ချီတစ်ချီ နာရီဝက်နီးပါးလောက်ပင် ခံနိုင်နေပြီဖြစ်ရာ ယခုကျော်ညွန့် အချက် ၁ဝဝလောက်နှင့် ငါးမိနစ်နီးပါးလောက်သာ ဆောင့်လိုးနိုင်မှုကို ဘယ်လိုမှ သူမ ကျေနပ်စရာ မရှိပေ။ တစ်ခုပဲ သူမ ကျေနပ်တာရှိသည်။
ထိုကျေနပ်မှုမှာ ကျော်ညွန့်၏ လီးတံကြီး မာတင်းတင်းနှင့် ထိထိမိမိ ခံစားရမှုပင်ဖြစ်သည်။ ကာမအရသာ ခံစားရသည်မှာ မာတင်းပူနွေးနေသော လီးတံဖြင့် စောက်ပတ်အတွင်းသားများကို နာနာပွတ်တိုက်ပေးမှုပင်။ ဦးသာဒင်လီးလို ပျော့သလိုလို မဟုတ်ဘဲ ချိုးမရ ကွေးမရအောင် မာတင်းနေသည့် လီးဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလိုးခံလိုက်ရမှုက မခင်မေအား သဘောကျစေလေသည်။ “ ဘယ်လိုလဲ ကိုလူပျိုရယ်၊ ခဏလေးနဲ့ နှစ်ချီပြီးသွားပြီ မဟုတ်လား … စိတ်လေးဘာလေး ထိန်းပြီး လုပ်မှပေါ့ အခုတော့ မောနေပြီထင်တယ် “ မခင်မေက အနည်းငယ် မကျေနပ်စိတ်ဖြင့် သူမကိုယ်ပေါ် ဖိပြီး မှိန်းနေသော ကျော်ညွန့်အား ပြောလိုက်သည်။ “ အင်း … ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူး … ထိန်းလို့မရလိုက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ် … မခင်မေ မပြီးသေးဘူး မဟုတ်လား … “
“ အင်းပေါ့ … ကဲပါ အမောဖြေပါအုံး … နောက်ဆိုရင် ဒီလောက် မလောနဲ့ … ဖြည်းဖြည်းသွားမှပေါ့ … မကြားဖူးဘူးလား … ပညာသင်တာတို့ … စီးပွားရှာတာတို့ … ကာမဂုဏ်ခံစားတာတို့မှာ သိနေသိနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ရတယ်ဆိုတာလေ “ “ ကြားဖူးတာ ကြားဖူးတာပဲ … တကယ်လုပ်တော့ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးဗျ … လူလဲ တော်တော် ဟိုက်သွားတယ် “ ကျော်ညွန့်က ပြောရင်း မခင်မေ၏ ပါးပြင်ကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ကာ ပါးပြင်ချင်း ထပ်လျက် မှေးနေလိုက်သည်။ မခင်မေကတော့ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ သူမကိုယ်ပေါ် မှောက်ပြီး အမောဖြေနေသူကို စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် ထပ်မံလိုးရန် နှိုးဆွပေးရန် တွေးလိုက်မိသည်။
ရွစိရွစိ ဖြစ်နေသော စောက်ပတ်ကြီးကြောင့် ကျော်ညွန့် အီဆိမ့်သွားရသလို မခင်မေမှာလည်း ဖင်ကိုကပ်ပြီး လှည့်မွှေပေးနေသော လီးတံကြီးကြောင့် တဆတ်ဆတ် တုန်သွားရသည်။ အတန်ကြာမှ တရှူးရှူး တဟဲဟဲ အသံများ ပျောက်သွားပြီး ကုတင်ထက်တွင် ထပ်လျက်သား ငြိမ်သက်သွားကြလေတော့သည်။ သွက်လက်မြူးကြွစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်နေသော ဒစ္စကို တေးသွား သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ အသံက အခန်းထဲတွင် မတိုးမကျယ်လေး ပြန့်လွင့်၍ နေသည်။ ထိုတေးသွားကို မှီပြီး တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ရှားနေသော မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ ဟန်က တေးသွားနှင့် လိုက်အောင် မြူးကြွနေသည်။ ပွဲကြည့် ပရိသတ် မရှိဘူးဟူသော အသိဖြင့် မိန်းကလေးက လွတ်လပ်ရဲတင်းစွာပင် တစ်ကိုယ်လုံးကို အချက်ကျကျ လှုပ်ရှားနေလေသည်။ တေးသွားနှင့် အေရိုးဗစ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေခြင်းမို့ တေးသွားအလိုက် ကိုယ်ကို သွက်လက်မြူးကြွစွာ ရွေ့လျားပေးနေရသည်။
စိတ်လည်း ပျော်စရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်လည်း အဆီကင်း၊ အချိုးအစားလည်း ပြေပြစ်စေသော ကစားနည်းတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ပါလက်ပါစွာဖြင့် ဟန်နီ လေ့ကျင့်နေသည်။ ဤအခန်းတွင် သူမတစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်ဟူသော စိတ်ကြောင့် ရဲရဲပင် ကားလိုက်၊ ကွလိုက်၊ မြှောက်လိုက်၊ ချလိုက်ဖြင့် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အချိုးညီစွာ လှုပ်ရှားပေးနေလေသည်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုသူမို့ အလွန်ကြည့်ကောင်းလှပေသည်။ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးကို ကြည့်လိုက်၊ တေးသွားအလိုက် မှီအောင် လှုပ်ရှားလိုက်ဖြင့် တစ်ဦးတည်း အလုပ်ရှုပ်လျက်ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနေမှုကို စိတ်ဝင်တစား ငေးကြည့်နေသူတစ်ဦးကိုတော့ ဟန်နီမသိ … သူမ အလုပ်ကိုသာ သွက်သွက်လက်လက်နှင့် လုပ်နေမိသည်။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေသော ဟန်နီအား ကြည့်ရှုနေသူတစ်ဦးကတော့ ကျော်ညွန့်ပင် ဖြစ်သည်။ လူရှေ့သူရှေ့တွင် မြင်ခွင့်ရရန် မလွယ်သော အခြေအနေများကို ကာယကံရှင်များ ကွယ်ရာမှ ချောင်းမြောင်း ကြည့်ရှုရသောအခါ အားနာစရာ၊ မျက်နှာ ပူစရာမလိုဘဲ ရဲရဲတင်းတင်း ကြည့်နိုင်သည်။ ရေချိုးခြင်း၊ လင်မယား အချစ်ပလူးခြင်း၊ တစ်ဦးတည်း ကာမခံစားခြင်းနှင့် ယခု ဟန်နီလို အားကစား ဝတ်စုံဖြင့် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ ချောင်းကြည့်မှ အားရပါးရရှိသည်။ ထိုအရသာများကို ကျော်ညွန့် သိနေပြီမို့ မခင်မေတို့ လင်မယား ကာမဆက်ဆံပုံကို လည်းကောင်း၊ မခင်မေ ရေချိုးသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဟန်နီ အေရိုးဗစ်ကစားသည်ကို လည်းကောင်း ချောင်းကြည့်တတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ဟန်နီ၏ အားကစား လေ့ကျင့်နေမှုကို အိမ်အပြင် အကာကြားမှ အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနှင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ ယခုလို သူချောင်းကြည့်မှုကို ဘယ်သူမှ မရိပ်မိ၊ ဘယ်သူမှ မသိသောကြောင့်လည်း လွတ်လပ်လျက်ရှိသည်။
ကုန်းလိုက်၊ ကွလိုက်၊ ကားလိုက်၊ ကော့လိုက်နှင့် ကော့ကော့ကံကား လှုပ်ရှားနေသော ဟန်နီ၏ ပြည့်တင်းနေသည့် ကိုယ်ဟန်မှာ မျက်စိရှေ့တွင် အားရစရာ ကောင်းနေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးကျသူမို့ မကြီးလွန်း မသေးလွန်းသည့် ရင်သားများက ဆွယ်တာအင်္ကျီအတွင်းဝယ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မြင်တွေ့နေရသည်။ ပြည့်တင်းသော လက်မောင်းသားများ၊ ချပ်ရပ်သော ဘိုက်သားနှင့် သေးကျဉ်သော ခါးကလေးများ အောက်ဝယ် ပြန့်ကားထွက်လာသည့် တင်ပါးဆုံသားကြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်အောင် စွင့်ကားလျက် ရှိသည်။ ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းကလည်း အရင်းတုတ်ခိုင်ပြီး အဖျားဘက်သို့ တစ်ဖြောင့်တည်း သွယ်ဆင်းသွားပုံမှာ ဆင်နှာမောင်းသဖွယ် အချိုးအစား ကျနလှသည်။
ဒူးခေါင်းလုံးလုံးလေးနှင့် ခြေသလုံး ခပ်တစ်တစ် ကလေးများကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပင်။ အထူးသဖြင့် အသားကပ်ဘောင်းဘီ အောက်တွင် သိသာရုံလေး ဖောင်းကြွနေသော ပေါင်ရင်းဂွဆုံမှ အသားအုံကလေးမှာ ကျော်ညွန့်စိတ်ကို ဆူဝေစေလေသည်။ အသားကပ် အင်္ကျီ ဘောင်းဘီများအောက်ရှိ အဖုအဖောင်းများ၊ အချိုင့်အဝှမ်းများက အနေတော်လောက်သာ ရှိသေးခြင်းမှာ ဟန်နီ့ကို ကျော်ညွန့် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေရပေသည်။ အသက် ၁၉ နှစ်လောက်နှင့် အရပ် ၅ပေ ၄လက်မလောက် ရှိသော ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ရင် ၃၃၊ ခါး ၂၃ နှင့် တင် ၃၅ လောက်ရှိနေခြင်းက ဟန်နီ၏ အလှကို မြင်သူ စွဲမက်စေလေသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အငမျးမရ